Ch 11 Asan'ny Apostoly – 2trondro
Home / Baiboly / Asan'ny Apostoly / Ch 11 Asan'ny Apostoly
Asan'ny Apostoly 11
11:1 Ary ny Apostoly sy ny rahalahy izay tany Jodia dia nahare fa ny jentilisa koa efa nandray ny Tenin'Andriamanitra.
11:2 Avy eo, rehefa i Petera fa niakatra ho any Jerosalema, ireo izay isan'ny voafora nandresy lahatra azy,
11:3 nanao hoe:, "Nahoana ianao no miditra ny tsy voafora ny lehilahy, ary nahoana ianao no niara-nihinana taminy?"
11:4 Ary Petera mba hanazava tamin'izy ireo, amin'ny fomba milamina, nanao hoe::
11:5 "Tany an-tanàna Jopa aho ka nivavaka, ary hitako fa, indro, amin'ny azon-tsindrimandry-tsaina, fahitana: nisy zavatra nidina, toy ny lamba rongony lehibe taratasy maha aoka eny an-danitra tamin'ny zorony efatra. Ary nanatona ahy.
11:6 Ary mijery ny azy, Nandinika aho ka nahita ny biby manan-tongotra efatra ambonin'ny tany, ary ny bibidia, ary ny biby mandady, ary ny zavatra manidina eny amin'ny rivotra.
11:7 Ary Izaho kosa dia nandre feo nilaza tamiko: 'Mitsangàna, Peter. Vonoy, ka hano. '
11:8 Fa hoy izaho:: 'Tsy, Tompo! Fa inona padina na tsy madio tsy mbola niditra tamin'ny vavako. '
11:9 Ary ny feo namaly fanindroany tany an-danitra, 'Izay efa nodiovin'Andriamanitra, dia tsy mba hataonao fady. '
11:10 Ankehitriny dia izany intelo no nanaovana. Ary avy eo ny zava-drehetra indray nakarina tany an-danitra.
11:11 Ary indro, nisy telo lahy nijanona teo akaikin'ny trano nitoeranay, izay iraka avy tany Kaisaria hankeo amiko.
11:12 Ary nisy fanahy niteny tamiko mba handeha hiaraka aminy, aza misalasala. Ary ireto rahalahy enina niaraka tamiko koa. Ary niditra tao an-tranon-dralehilahy.
11:13 Ary Nilaza ho taminay ny nahitany ny anjely tao an-tranony, nitsangana ka nanao taminy hoe: 'Maniraha ho any Jopa, ka ampanalao Simona, izay atao hoe koa Petera.
11:14 Ary holazainy aminao teny, izay ianareo ka hovonjena amin'ny trano manontolo. '
11:15 Ary rehefa efa nanomboka niteny, ny Fanahy Masina nilatsaka taminy, tahaka ny tamintsika, tany am-piandohana.
11:16 Dia nahatsiaro ny tenin 'ny Tompo, araka izay manao hoe:: 'John, tokoa, batisa tamin'ny rano, fa ianareo kosa hatao batisa amin'ny Fanahy Masina. '
11:17 Noho izany, Andriamanitra, raha nanome azy ny fahasoavana, tahaka ho antsika, izay nino ny Tompo Jesoa Kristy, izay I, fa ho afaka mandrara an'Andriamanitra?"
11:18 Ary rehefa nandre izany, dia nangina. Ka nanome voninahitra an'Andriamanitra, nanao hoe:: "Noho izany dia manana Andriamanitra koa no nomena ny jentilisa koa ny fibebahana hahazoany fiainana."
11:19 Ary ny sasany, rehefa niparitaka noho ny fanenjehana izay efa nitranga teo ambany Stephen, nandeha manodidina, hatrany Foinika sy Kyprosy ary Antiokia, miteny ny Teny na amin'iza na amin'iza, afa-tsy ny Jiosy ihany.
11:20 Fa ny sasany amin'ireo lehilahy avy any Kyprosy sy Kyrena, rehefa niditra tao Antiokia, dia niteny ny jentilisa koa ny, nanambara ny Tompo Jesosy.
11:21 Ary ny tanan'ny Tompo nomba azy ireo. Ary maro no isan'izay nino sy niova fo ho an'ny Tompo.
11:22 Ary ny vaovao tonga teo amin'ny sofin'ny fiangonana tany Jerosalema ny amin'izany zavatra izany, dia naniraka an'i Barnabasy izy handeha hatrany Antiokia.
11:23 Ary rehefa tonga teo ka nahita ny fahasoavan'Andriamanitra, dia faly. Ary nananatra azy rehetra haharitra ao amin'ny Tompo amin'ny fo tapa-kevitra.
11:24 Fa lehilahy tsara, ary dia feno ny Fanahy Masina sy ny finoana. Ary nisy olona maro no nanampy ho an'ny Tompo.
11:25 Ary Barnabasy niainga ho any Tarsosy, ka mba hitady an'i Saoly. Ary rehefa nahita azy, dia nitondra azy ho any Antiokia.
11:26 Ary niresaka teo izy ireo ao amin'ny Fiangonana ho an'ny taona iray manontolo. Ary nampianatra olona maro be toy izany, fa tany Antiokia ny mpianatra fantatra voalohany ny anarana hoe Kristianina.
11:27 Ary tamin'izany andro izany, mpaminany avy tany Jerosalema nankany Antiokia.
11:28 Ary ny anankiray teo aminy, atao hoe Agabo, eny, nifoha, midika ny alalan 'ny Fanahy fa tsy handeha ho mosary be eran'ny izao tontolo izao, izay no nitranga andron'i Klaodio.
11:29 Dia nilaza ny mpianatra, araka izay samy nanana, izay izy ireo hanolotra ho nalefa tany ny rahalahy izay nonina tany Jodia.
11:30 Ary toy izany koa no nataony, no nampitondrainy izany ho any amin'ny loholona ny tànan'i Barnabasy sy Saoly.
Asan'ny Apostoly 12
12:1 Ary tamin'izany andro izany, Heroda mpanjaka omena ny tanany, mba hampahory ny sasany avy amin'ny Fiangonana.
12:2 Ary izy namono an'i Jakoba, ny rahalahin'i Jaona, tamin'ny sabatra.
12:3 Ary rehefa hitany fa sitraky ny Jiosy, dia niainga manaraka mba hisambotra an'i Petera koa. Ankehitriny dia ny andro mofo tsy misy masirasira.
12:4 Ary rehefa nosamboriny izy, dia nirahiny tany an-trano-maizina, nanolotra azy ho eo an-tranomaizina noho ny efatra vondrona efatra miaramila, nikasa hamokarana azy ny olona rehefa afaka ny Paska.
12:5 Ary toy izany Petera dia notànana tany am-ponja. Fa rehefa natao ny vavaka ireo, ka aza mitsahatra, ny Fiangonana, ho an'Andriamanitra ho azy.
12:6 Ary nony Heroda vonona ny mamokatra azy, amin'izany alina, Petera dia natory teo anelanelan'ny miaramila roa lahy, ary voafatotra tamin'ny gadra roa. Ary nisy mpiambina teo anoloan'ny varavarana, Miaro an-tranomaizina.
12:7 Ary indro, ny anjelin'ny Tompo tonga teo akaikin'i, sady nisy mazava namirapiratra tao an-efitra nivoaka. Ary nipaipaika ny tehezan'i Petera, Dia nifoha izy, nanao hoe:, "Mitsangàna, haingana. "Ary ny gadra niala avy tamin'ny tànany.
12:8 Ary hoy ilay anjely nanao taminy hoe:: "Dress ny tenanao, ary anaovy ny kiraro. "Dia nataony izany,. Ary hoy izy taminy:, "Fonosy ny akanjo manodidina ny tenanao ka hanaraka Ahy."
12:9 Ary nivoaka, dia nanaraka Azy. Ary tsy nahalala izany fahamarinana izany: fa izany dia atao amin'ny alalan'ny anjely. Fa nataony ho fa efa nahita fahitana.
12:10 Ary nandalo ny voalohany sy faharoa mpiambina, dia tonga teo amin'ny vavahady vy izay mitondra ho any an-tanàna; dia nisokatra ho azy ireo ho azy. ary niala, izy ireo nanohy lafiny iray eny an-dalambe. Ary ny anjely tampoka niala avy aminy.
12:11 Ary Petera, niverina ny tenany, nanao hoe:: "Ankehitriny dia fantatro, tena, fa ny Tompo efa naniraka ny anjeliny, ary izy namonjy ahy tamin'ny tànan'i Heroda sy ny avy amin'izay rehetra ny vahoakan 'ny Jiosy dia niandry. "
12:12 Ary raha mbola nandinika izany, dia tonga tao an-tranon'i Maria, ny renin'i Jaona, izay atao hoe koa Marka,, izay maro nivory sy nivavaka.
12:13 Avy eo, raha nandondona teo am-baravaran'ny ny vavahady, ankizivavy nivoaka mba hamaliana, no anarany Rhoda.
12:14 Ary rehefa nahalala ny feon'i Petera, amin'ny fifaliana, dia tsy namoha ny vavahady, fa raha tokony, milatsaka ho, izy nilaza fa Petera no mijanona eo am-bavahady.
12:15 Fa ireo nanao taminy hoe:, "Ianao no adala." Fa izy dia nanamafy fa izany dia. Ary izy ireo nanao hoe:, "Izany no anjely."
12:16 Fa Petera maharitra amin'ny mandondòna. Ary nony efa nosokafany, dia nahita azy izy ireo ka gaga.
12:17 Fa motioning ho azy ireo ny tànany mba hangina, dia nanazava ny fomba Jehovah efa nitondra an'i Jesosy ho tany am-ponja. Ary hoy izy:, "Ampahafantaro Jakoba sy ireo rahalahy." Ary nivoaka, dia lasa nankany amin'ny fitoerana hafa.
12:18 Avy eo, rehefa tonga daylight, tsy nisy tabataba kely eo amin'ny miaramila, toy ny zava-nitranga momba an'i Petera.
12:19 Ary rehefa Heroda efa nangataka azy ary tsy hahazo azy, rehefa nahazo ny mpiambina nalaina am-bavany, Nandidy azy ireo nentina. Ary nidina avy tany Jodia ho any Kaisaria, dia tafandriana tao.
12:20 Ary izy dia tezitra ny an'i Tyro sy Sidona. Nefa ireny dia tonga ho azy dia niray, ary, rehefa nandresy lahatra Blastus, izay, no mpifehy ny trano fitehirizam-pandriana 'ny mpanjaka, dia nangataka ho amin'ny fandriampahalemana, satria ny faritra dia namatsy sakafo avy aminy.
12:21 Avy eo, tamin'ny andro voatondro, Heroda niakanjo akanjo manjaka, ary nipetraka teo amin'ny seza fitsarana teo, Ary naneho kabary ho azy ireo.
12:22 Avy eo ny olona niantso, "Ny Feon'Andriamanitra, fa tsy amin'ny olona!"
12:23 Ary niaraka tamin'izay dia, nisy anjelin'ny Tompo namely azy, satria tsy nanome voninahitra an'Andriamanitra. Ary rehefa lany ritra ny kankana, dia niala aina.
12:24 Fa ny tenin'ny Tompo dia nitombo ary hahamaro.
12:25 Ary Barnabasy sy Saoly, rehefa vita ny asa fanompoana, niverina avy tany Jerosalema, nitondra aminy John, izay atao hoe koa Marka,.
Asan'ny Apostoly 13
13:1 Ary nisy, ao amin'ny Fiangonana tany Antiokia, mpaminany sy ny mpampianatra, isan'ireny dia Barnabasy, ary Simon, izay atao hoe ny Black, sy Losio Kyreniana, ary dia nifady hanina, izay ny Foster rahalahin'i Heroda mpanapaka, ary Saoly.
13:2 Ary raha nanao fanompoam-pivavahana ho an'ny Tompo sy nifady hanina, ny Fanahy Masina nanao taminy: "Atokàny Saoly sy Barnabasy ho ahy, hanao ny asa izay efa nifidy azy ireo. "
13:3 Avy eo, nifady hanina sy nivavaka ary nametra-tànana taminy, dia nandefa azy.
13:4 Ary izay iraka Fanahy Masina, dia nankany Seleokia. Ary niala tao izy niondrana an-tsambo teo hankany Kyprosy.
13:5 Ary rehefa tonga tao Salamisy, izy, dia nitory ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny synagogan'ny Jiosy. Ary izy ireo koa i Jaona eny amin'ny fanompoana.
13:6 Ary nony efa nandeha nandritra ny manontolo nosy, hatrany Pafo, dia nahita lehilahy anankiray, ny ody, mpaminany sandoka, Jiosy, atao hoe Bar-Jesu.
13:7 Ary izy niara ny governora tsy hanaiky, Sergei Paul, Ny olon-kendry. io lehilahy io,, niantso Barnabasy sy Saoly, te hihaino ny Tenin'Andriamanitra.
13:8 Fa Elyma, mpanao ody (fa izany no anarany, raha adika) nitsangana teo anatrehany izy, nitady hampivily ny governora tsy hanaiky hiala amin'ny Finoana.
13:9 Ary Saoly, izay atao hoe koa Paoly, rehefa feno ny Fanahy Masina, nijery azy tsara,
13:10 ka hoy Izy:: "Dia feno ny fitaka rehetra sy ny lainga rehetra,, zanaky ny devoly, fahavalon'ny fahamarinana rehetra,, tsy hitsahatra ianao, mba hanimbana ny marina lalan 'ny Tompo!
13:11 Ary ankehitriny, indro, ny tanan 'ny Tompo efa mby aminareo. Ary dia ho jamba, tsy hahita masoandro mandritra ny fotoana lava. "Ary avy hatrany ny zavona sy ny haizina nanarona azy. Ary nirenireny manodidina, dia nitady olona izay mety hitarika azy izy.
13:12 Ary ny governora, nony nahita izay efa natao, nino, na dia nanana mahagaga noho ny fotopampianaran 'ny Tompo.
13:13 Ary rehefa Paoly sy ireo izay niaraka taminy dia niondrana an-tsambo niala avy tany Pafo, dia tonga tany Perga any Pamfylia. Ary Jaona nandao azy ka niverina nankany Jerosalema.
13:14 Na izany aza tena, izy ireo, nandeha tamin'ny avy any Perga, tonga tany Antiokia any Pisidia. Ary eo niditra tao amin'ny synagoga tamin'ny andro Sabata, Dia nipetraka.
13:15 Avy eo, rehefa vita ny famakiana avy ao amin'ny Lalàna sy ny Mpaminany, ny mpitarika ny synagoga dia nampilaza taminy, nanao hoe:: "Noble rahalahy, raha misy ao aminareo misy fananarana ny olona, miteny. "
13:16 Ary Paoly, eny, nifoha ary motioning ny fahanginan'ny ny tànany, nanao hoe:: "Ry lehilahy Isiraely sy ianareo izay matahotra an'Andriamanitra, mihaino tsara.
13:17 Ny Andriamanitry ny olona Isiraely efa nifidy ny razantsika, ka nanandratra ny olona, fony izy ireo voanjo any amin'ny tany Egypta. Ary miaraka amin'ny sandriny ambony, Jesosy nitondra azy niala teo.
13:18 Ary nandritra ny efa-polo taona, dia niaritra ny fitondran-tena any an-efitra.
13:19 Ary dia ny nandravany firenena fito tany amin'ny tany Kanana, nozarainy ny taniny teo aminy araka ny filokana,
13:20 rehefa afaka tokony ho dimam-polo amby efa-jato taona. Ary rehefa afaka izany,, dia nomeny mpitsara izy, na dia mandra-mpaminany Samoela.
13:21 Ary taty aoriana, dia nangataka ho mpanjaka. Ka dia nomen'Andriamanitra azy Saoly, ny zanak'i Kisy, nisy lehilahy anankiray avy tamin'ny firenen'i Benjamina, efa-polo taona.
13:22 Ary rehefa nanaisotra an'i Saoly, dia nanangana mpanjaka ho azy David. Fijoroana ho vavolombelona sy ny fanatitra hohanina momba azy, hoy izy:, 'Efa nahita an'i Davida, ny zanak'i Jese, mba ho olona araka ny sitraponao, iza no hanatanteraka izay rehetra sitrako. '
13:23 Avy ny taranany, araka ny fampanantenana, Andriamanitra dia nitondra an'i Jesosy ho an'ny Isiraely ny Mpamonjy.
13:24 Jaona nitory, eo anatrehan'i ny fiaviany, ny batisan'ny fibebahana, ny vahoaka rehetra tamin'ny Isiraely.
13:25 Avy eo, rehefa vita ny nalehany John, dia nanao hoe:: «Tsy izaho no ilay no mihevitra ahy ho. Fa, indro, iray tonga ao aoriako, ny kapa eo an-tongony ka izaho tsy miendrika hamaha. '
13:26 Noble rahalahy, zanaky ny taranak'i Abrahama, sy izay rehetra eo aminareo matahotra an'Andriamanitra, dia ho anao ny tenin'izao famonjena izao dia efa nalefa.
13:27 Ho an'ireo izay nonina tany Jerosalema, sy ny mpanapaka, tsy ny fanarahana azy, na ny feon'ny mpaminany izay vakina isan-tsabata izay, tanteraka izany tamin'ny nanamelohany azy.
13:28 Ary na dia tsy hitany aza raharaha ho faty azy, ka nitalaho tamin'i Pilato, ka dia mba hamonoany Azy.
13:29 Ary rehefa nahatanteraka izay rehetra efa voasoratra momba azy, nitondra azy hiala amin'ny hazo, dia nametraka azy tao am-pasana.
13:30 Na izany aza tena, Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo.
13:31 Ary Izy niseho andro maro 'ireo izay niara-niakatra taminy avy tany Galilia ho any Jerosalema, izay na dia ankehitriny dia ireo no vavolombelony amin'ny olona.
13:32 Ary izahay no nanambara aminareo dia ilay teny fikasana, izay natao tamin'ny razantsika,
13:33 dia tanteraka 'Andriamanitra ho an'ny ankizy tamin'ny nananganany an'i Jesosy, araka ny voasoratra eo amin'ny Salamo faharoa koa: 'Ianao no Zanako. Ity andro ity izaho no niteraka anareo. '
13:34 Ankehitriny, satria nananganany Azy tamin'ny maty, mba tsy hiverina ho amin'ny lo intsony, efa nilaza izany: 'Homeko anareo ny zava-masina Davida, mahatoky iray. '
13:35 Ary koa avy eo, eo amin'ny teny hafa, hoy izy: 'Tsy hamela ny Iray Masinao ho latsaka ao amin'ny lavaka.'
13:36 Fa Davida, rehefa nanompo ny taranaka araka ny sitrapon 'Andriamanitra, tafatory, ary dia napetraka akaikin'ny razany, ary tratry ny lò.
13:37 Na izany aza tena, Izay efa nitsangana tamin'ny maty dia tsy hita kolikoly.
13:38 Noho izany, aoka ho fantatrareo, rahalahy mendri-kaja, fa amin'ny alalany no nanambara aminareo famelan avy amin'ny fahotana sy amin'ny zava-drehetra amin'ny alalan'ny izay tsy afaka hohamarinina ao amin'ny lalàn'i Mosesy.
13:39 Izy no, izay rehetra mino mitady hohamarinina.
13:40 Noho izany, Mitandrema, fandrao izay hoy ny mpaminany mba hanafotra anao:
13:41 'Ianareo mpamotsifotsy! Jereo, dia gagà, ary hiparitaka! Fa Izaho manao ny asa amin'ny andronareo, ny asa izay tsy mino, na dia misy olona dia ny manazava izany aminareo. ' "
13:42 Avy eo, raha mbola hiala, dia nanontany azy raha toa, amin'ny Sabata manaraka, mba hilaza izany teny izany taminy.
13:43 Ary rehefa ny synagoga efa voaroaka, maro teo anivon 'ny Jiosy sy ny mpivavaka vaovao dia nanaraka an'i Paoly sy Barnabasy. ary izy ireo, niresaka tamin'izy ireo, namporisika azy haharitra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra.
13:44 Na izany aza tena, amin'ny Sabata manaraka, efa ho ny tanàna iray manontolo dia nivory mba hihaino ny Tenin'Andriamanitra.
13:45 Ary ny Jiosy, nony nahita ny vahoaka, dia feno fialonana, ary izy ireo, niteny ratsy, nanohitra ny zavatra tonga teo lazaina Paoly.
13:46 Ary Paoly sy Barnabasy dia niteny hentitra: "Tena ilaina ny milaza ny Tenin'Andriamanitra aloha ianao. Fa satria mandà izany, ary toy izany koa manao ny tenanareo ho tsy mendrika ny fiainana mandrakizay, indro, dia mitodika mankany amin'ny jentilisa.
13:47 Fa izao dia manana ny Tompo dia nampianatra antsika: 'Efa nanendry Anao ho fahazavan'ny amin'ny jentilisa, mba ho famonjena hatrany amin'ny faran'ny tany. ' "
13:48 Ary ny jentilisa, rehefa nandre izany, dia faly, ka dia nanome voninahitra ny Tenin'ny Tompo. Ary izay rehetra nino dia preordained ho amin'ny fiainana mandrakizay.
13:49 Ary ny tenin'ny Tompo dia aparitaka manerana ny faritra manontolo.
13:50 Fa ny Jiosy sasany nampirisika ny vehivavy mpivavaka tsara sy manao ny marina, ary ny mpitondra tao an-tanàna. Ary nahatonga fanenjehana tamin'i Paoly sy Barnabasy. Ary nandroaka azy hiala ny faritra.
13:51 anefa izy ireo, mangovitra ny vovoka tamin'ny tongony hiampanga ireo, nandeha Ikonioma.
13:52 Dia toy izany koa ny mpianatra feno fifaliana sy ny Fanahy Masina.
Asan'ny Apostoly 14
14:1 Ary nony tany Ikonioma Paoly sy Barnabasy dia niditra ho eo an-synagogan'ny Jiosy, ary niteny toy izany fomba maro be ny copious na Jiosy na jentilisa nino.
14:2 Na izany aza tena, ny Jiosy izay tsy mino sy enflamed efa nampirisika ny fanahin'ny jentilisa hanohitra ny rahalahy.
14:3 Ary noho izany, dia nijanona nandritra ny fotoana ela, manao zavatra amim-pahatokiana ao amin'ny Tompo, fanatitra ho vavolombelona ny tenin'ny fahasoavany, manome famantarana sy ny fahagagana nataon'ny tànany.
14:4 Ary ny vahoaka tao an-tanàna nisara-tsaina. Ary azo antoka fa, ny sasany nomba ny Jiosy, nefa tena hafa teo amin'ny Apôstôly.
14:5 Ary rehefa misy fanafihana efa nomanina noho ny jentilisa sy ny Jiosy mbamin'ny mpitondra, ka mba hitondra azy tsinontsinona sy vato azy ireo,
14:6 izy ireo, tonga saina izany, Niara-nandositra nankany Lystra sy Derbe, tanàna any Lykaonia, sy ny faritra rehetra manodidina,. Ary fitoriana ny filazantsara izy ireo amin'izany toerana.
14:7 Ary nisy lehilahy anankiray nipetraka tany Lystra, kilemaina amin'ny tongony, nalemy tongotra hatrany an-kibon-dreniny, izay tsy nandeha an-tongotra.
14:8 Io lehilahy io, Paoly, nony niteny. ary Paoly, nandinika azy tsara, ka nahita fa nanam-pinoana, ka mba ho sitrana,
14:9 dia niteny tamin'ny feo mahery, "Mijoroa amin 'ny tongotrao!"Dia nitsangana tampoka izy ka nandeha manodidina.
14:10 Fa raha ny vahoaka efa nahita izay zavatra nataon'i Paoly, dia nanandratra ny feony ao amin'ny fiteny lykaonianina, nanao hoe:, "Ny andriamanitra, dia nandray ny endriky ny olona, efa nidina ho antsika!"
14:11 Ary ny anaran'i Barnabasy, 'Jupiter,'Nefa tena dia atao hoe Paul, 'Mercury,'Satria izy no nitarika mpandahateny.
14:12 koa, ny mpisoron'ilay Jopitera, izay ivelan'ny tanàna, eo anoloan'ny am-bavahady, nitondra omby sy fehiloha voninkazo nankeny, Vonona ny hanolotra zavatra vonoina hatao fanatitra ny olona.
14:13 Ary raha vao ny Apôstôly, Barnabasy sy Paoly, efa nandre izany, nandrovitra ny mitondra akanjo, dia niantoraka teo an-vahoaka, niantso mafy
14:14 ary nanao hoe:: "Men, Nahoana no hanao izany? Izahay koa dia olombelona, ny olona toy ny tenanareo, mitory aminao mba hiova fo, avy amin'ireo zava-poana, ho an'ilay Andriamanitra velona, Izay nanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy.
14:15 In taranaka teo aloha, dia navelany ny firenena rehetra handeha tamin'ny làlana tiany haleha.
14:16 Azo antoka fa, tsy namela ny tenany tsy hanana fijoroana ho vavolombelona, fanaovan-tsoa avy any an-danitra, manome orana sy ny taon-jina, mameno ny fonareo amin'ny hanina sy ny fifaliana. "
14:17 Ary nilaza izany, izy ireo zara raha afaka nahasakana ny vahoaka tsy immolating ho azy ireo.
14:18 Ary nisy Jiosy sasany avy tany Antiokia sy Ikonioma tonga teo. Ary rehefa nitaona ny vahoaka, ka nitora-bato an'i Paoly sady nitaritarika azy ho eny ivelan'ny tanàna, Nieritreritra azy ho efa maty.
14:19 Fa ho toy ny mpianatra nitsangana manodidina azy, nitsangana izy ka niditra tao an-tanàna. Ary ny andro manaraka, dia niainga izy sy Barnabasy ka nankany Derbe.
14:20 Ary nony efa Evanjely tsy amin'izany tanàna, ka nahazo mpianatra maro, dia niverina nankany Lystra sy Ikonioma ary Antiokia,
14:21 nampahery ny fanahin'ny mpianatra, ka nananatra azy rehetra Izy mba hitoetra mandrakariva amin'ny finoana, ary tsy maintsy ho antsika ny hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny fahoriana be no.
14:22 Ary rehefa nanorina mpisorona ho azy ireo isaky ny fiangonana, dia nivavaka sady nifady hanina, dia nanolotra azy ho an'ny Tompo, in Izay efa ninoany.
14:23 Ary nandeha tamin'ny lalana Pisidia, dia tonga tany Pamfylia.
14:24 Ary nony efa nitory ny tenin'ny Tompo ao Perga, dia nidina nankany Atalia.
14:25 Ary niala teo, dia niondrana an-tsambo nankany Antiokia, izay efa nanolotra ho amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ho amin'ny asa izay efa tanteraka izao.
14:26 Ary nony efa tonga ary efa namory ny fiangonana, dia nitantara ny zavatra lehibe efa nataon'Andriamanitra tamin'ny nombany azy, sy ny namohany varavaram-pinoana ho an'ny jentilisa.
14:27 Dia nitoetra ho tsy kely ny fotoana ihany tamin'ny mpianatra izy.
Asan'ny Apostoly 15
15:1 Ary ny sasany, nidina avy tany Jodia, dia nampianatra ny rahalahy, "Raha tsy forana araka ny fanaon'i Mosesy, tsy afaka ho voavonjy. "
15:2 Noho izany, i Paoly sy Barnabasy, rehefa tsy nanao kely fitroarana hamely azy ireo, Nanapa-kevitra izy ireo fa i Paoly sy Barnabasy, ary ny sasany avy amin'ny mpanohitra lafiny, mba hiakatra ho any amin'ny apostoly sy ny mpisorona tany Jerosalema ny amin'izany fanontaniana.
15:3 Noho izany, tarihin'ny ny fiangonana, dia nandeha namaky an'i Foinika sy Samaria, nilaza ny niovan'ny jentilisa. Ary dia nampifaly ny rahalahy rehetra teo.
15:4 Ary nony efa tonga tany Jerosalema, izy, dia noraisin'ny fiangonana sy ny Apostoly ary ny loholona, tatitra ny zavatra lehibe efa nataon'Andriamanitra tamin'ny nombany azy.
15:5 Fa ny sasany avy amin'ny isan'ny antokon'ny Fariseo, ireo izay mpino, nitsangana nanao hoe:, "Tsy maintsy ho azy ireo hoforana sy mba handray torolalana mba hitandrina ny Lalàn'i Mosesy."
15:6 Ary ny Apostoly sy ny loholona dia nivory mba hikarakara izany zavatra izany.
15:7 Ary rehefa afaka ny fifandirana lehibe efa nitranga, Dia nitsangana Petera ka nanao taminy hoe: "Noble rahalahy, fantatrao fa, tao anatin'ny andro vitsivitsy, Andriamanitra efa nifidy avy eto amintsika, ny vavako, Jentilisa mba hihaino ny tenin 'ny Filazantsara sy ny mino.
15:8 ary Andriamanitra, iza no mahalala ny fo, nanatitra fijoroana ho vavolombelona, tamin'ny fanomezana ny Fanahy Masina ho, toy ny antsika.
15:9 Ary nampiavaka na inona na inona isika sy izy, fa nodioviny tamin'ny finoana ny fony.
15:10 Koa ankehitriny, Nahoana no maka fanahy an'Andriamanitra mba hametraka zioga amin'ny vozon'ny mpianatra, izay tsy razantsika na isika no afaka hitondra?
15:11 Fa noho ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, inoantsika mba ho voavonjy, ao izany koa toy ny azy ireo. "
15:12 Ary ny vahoaka manontolo dia mangina. Ary izy ireo nihaino an'i Barnabasy sy Paoly,, namaritra ny zavatra famantarana lehibe sy ny fahagagana nampanaovin'Andriamanitra azy tany amin'ny jentilisa izy ireo.
15:13 Ary rehefa efa niteny, James namaly tamin'ny hoe:: "Noble rahalahy, henoy aho.
15:14 Simon dia nanazava ny Amin'ny Fomba Ahoana nitsidika voalohany Andriamanitra, mba handray avy amin'ny jentilisa ny olona ny anarany.
15:15 Ary ny tenin 'ny Mpaminany ao fanekena ity, araka ny voasoratra:
15:16 'Rehefa afaka izany,, Hody, ary Izaho no hanorina indray ny trano-lain'i Davida, izay efa nianjera. Ary Izaho hanorina indray ny rava, ary Izaho hanangana indray izy,
15:17 ka ny olona sisa dia mety hitady ny Tompo, mbamin'ny firenena rehetra izay ny anarako no hampiharina, hoy Jehovah, izay manao ireo zavatra ireo. '
15:18 Ho an'ny Tompo, ny asany dia fantatra amin'ny mandrakizay.
15:19 Noho io, Izaho tsy mitsara fa ireo izay niova fo ho an'Andriamanitra avy amin'ny jentilisa izay tsy mba ho taitra,
15:20 fa raha tokony mba manoratra ho azy ireo, mba hiaro ny tenany amin 'ny fahalotoana ny sampy, ary ny fijangajangana, ary na inona na inona efa sempotra, sy ny ra.
15:21 Fa Mosesy, hatramin'ny ela, Tamin'ilay isan-tanàna nitory momba azy ireo eo amin'ny synagoga, izay vakina isan-tsabata izay. "
15:22 Ary sitraky ny Apostoly sy ny loholona, miaraka amin'ny Fiangonana manontolo, ny hifidy olona avy teo aminy, ary maniraha ho any Antiokia, hiaraka amin'i Paoly sy Barnabasy, ary Jodasy, izay atao hoe koa Barsabbas, sy i Silasy, faran'izay lehibe teo anivon'ny rahalahy,
15:23 izay efa nosoratan 'ny tanana: "Ny Apostoly sy ny loholona, rahalahy, ho an 'ireo izay any Antiokia sy Syria ary Kilikia, rahalahy avy amin'ny jentilisa, fiarahabana.
15:24 Satria efa renay fa ny sasany, nivoaka avy teo aminay, dia raiki-tahotra anareo amin'ny teny, nampikomy ny fanahinareo, izay tsy nasainay nanao,
15:25 sitraky anay, rehefa nivory tahaka ny olona, ny hifidy olona sy ny hirahina hankatỳ aminareo, hiaraka amin'i indrindra Barnabasy sy Paoly malalanay:
15:26 olona izay efa natolotra ny fiainany amin'ny anaran'ny ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika.
15:27 Noho izany, nirahinay Joda sy Silasy, izay ny tenany ihany koa dia, amin'ny niteny teny, hanamafy aminareo izany teny izany koa.
15:28 Fa efa sitraky ny Fanahy Masina sy izahay ny tsy hanampy enta-mavesatra hametraka aminareo, hafa noho ireo zavatra tsy maintsy hotandremana:
15:29 fa hifadianareo ny hena sorona ho an'ny sampy, sy ny ra, ary avy amin'izay efa sempotra, ary ny fijangajangana. Ho tsara mba arovy ny tenanareo amin'ny ireo zavatra ireo. Veloma. "
15:30 Ary noho izany, rehefa voaroaka, dia nidina nankany Antiokia. Ary manangona ny vahoaka niara-, dia natolony ilay epistily.
15:31 Ary nony efa namaky izany, faly izy ireo noho izany fampiononana.
15:32 Fa Joda sy Silasy, satria mpaminany ny tenany, nampahery an'ireo rahalahy tamin'ny teny maro, ka dia nampahery.
15:33 Avy eo, rehefa avy nandany fotoana bebe kokoa ny sasany any, izy ireo, dia nampandehanin'ny amin'ny fiadanana, amin'ny rahalahy, ho any amin'izay naniraka azy.
15:34 Nefa mbola sitrak'i Silasy ny hitoetra ho any. Ary Jodasy irery niala tany Jerosalema.
15:35 Ary Paoly sy Barnabasy nijanona tany Antiokia, miaraka amin'ny maro hafa, fampianarana sy fitoriana ny filazantsara ny Tenin'ny Tompo.
15:36 Avy eo, rehefa afaka andro vitsivitsy, Hoy Paoly tamin'i Barnabasy, 'Andao isika hiverina hitsidika ireo rahalahy eran' ny tanàna izay efa nitoriantsika ny Tenin'ny Tompo, mba hahitantsika izay toetrany. "
15:37 Ary tian'i Barnabasy ny hitondra an'i Jaona naniry, izay atao hoe koa Marka,, amin'izy ireo ihany koa.
15:38 Paoly dia nilaza fa izany dia tokony tsy ho nahazo, satria niala avy azy tany Pamfylia, ary tsy mbola nodiavin'ny amin'ireo teo an-asa.
15:39 Ary nisy ny nifanditra, ho toy izany hany ka nony niala hafa. ary Barnabasy, tokoa nitondra Mark, niondrana an-tsambo nankany Kyprosy.
15:40 Na izany aza tena, Paul, mifidy Silas, teo avy, efa natolotra araka ny rahalahy ho amin'ny fahasoavan'ny Tompo izy.
15:41 Dia nandeha namaky an'i Syria sy Kilikia, nampahery ny Fiangonana, mampianatra azy ireo hitandrina ny didy ny apostoly sy ny anti-panahy.
Asan'ny Apostoly 16
16:1 Dia tonga tany Derbe sy Lystra. Ary indro, nisy mpianatra anankiray teo atao hoe Timoty i, ny zanaky ny vehivavy jiosy mpino, ny rainy ny hafa firenena.
16:2 Ary ny rahalahy tany Lystra sy Ikonioma nadika hoe tsara laza ho azy.
16:3 Tian'i Paoly io lehilahy io mba handeha niaraka taminy, ary nitondra azy, dia noforany, noho ny Jiosy tany amin'izany toerana. Satria fantatr'izy rehetra fa ny rainy i Jentilisa.
16:4 Ary raha nandeha nitety ny tanàna, dia natolony ho azy ireo ny foto-pinoana mba hotehirizina, Namoaka didy izay nataon'ny Apostoly sy ny loholona tany Jerosalema.
16:5 Ary azo antoka fa, ny Fiangonana dia ho nihanahery finoana ka nitombo isan-andro.
16:6 Avy eo, raha nita ny alalan 'Frijia sy ny faritr'i Galatia, izy ireo tsy navela 'ny Fanahy Masina tsy hiteny ny teny tany Asia.
16:7 Ary rehefa tonga tany Mysia, dia nitady hankany Bitynia, fa ny Fanahin'i Jesosy dia tsy hamela azy ireo.
16:8 Avy eo, rehefa tafita amin'ny alalan'ny Mysia, izy, dia nidina nankany Troasy.
16:9 Ary fahitana tao amin'ny alina dia Nilaza tamin'i Paoly, avy nisy lehilahy Makedoniana, nitsangana teo ka niangavy taminy, ary nanao hoe:: "Hiditra ao Makedonia, ka vonjeo izahay!"
16:10 Avy eo, rehefa nahita ny fahitana, avy hatrany dia nitady fomba niainga ho Makedonia, rehefa matokia fa Andriamanitra no efa niantso anay hitory ny filazantsara ho azy ireo.
16:11 Ary rehefa nandeha tany Troasy, naka mivantana lalana, dia tonga tany Samotrakia, sy ny andro manaraka, amin'ny Neapolia,
16:12 dia niala tao nankany Filipy, izay ny lehibe indrindra tanàna tany amin'ny faritr'i Makedonia, ny zanatany. Ankehitriny izahay teo amin'izany tanàna izany andro vitsivitsy, fanomezana miara-.
16:13 Avy eo, amin'ny andro Sabata, izahay dia nandeha ivelan'ny vavahady, afa-tsy ny renirano, izay misy toa ho famoriam-bavaka. Ary nipetraka teo, izahay dia niresaka tamin'ny vehivavy vory teo.
16:14 Ary nisy vehivavy anankiray, atao hoe Lydia, mpivarotra lamba volomparasy tao an-tanànan'i Tyatira, mpivavaka 'Andriamanitra, nihaino. Ary ny Tompo nanokatra ny fony mba hanaiky ny zavatra i Paoly hoe:.
16:15 Ary rehefa natao batisa, sy ny ankohonany, dia nitaraina tamintsika, nanao hoe:: "Raha efa nanome ahy ny rariny mba ho mahatoky amin'ny Tompo, hiditra ao an-tranoko ka handry any. "Dia resy lahatra izahay.
16:16 Avy eo dia nitranga fa, rehefa nandeha nivoaka ny vavaka, dia nisy ankizivavy, nanam-panahy sikidy, nihaona taminay. Izy dia loharanom-tombony be ny tompony, ny alalan 'ny maminany.
16:17 ity tovovavy, nanaraka an'i Paoly sy izahay, ka ninananana, nanao hoe:: "Ireo lehilahy ireo dia mpanompon'Andriamanitra Avo Indrindra! Izy ireo dia manambara aminareo ny lalan'ny famonjena!"
16:18 Ary izy fitondran toy izany nandritra ny andro maro. fa Paoly, sady nalahelo, dia nitodika ka nanao tamin'ny fanahy, "Andidiako anao, amin 'ny anaran' i Jesoa Kristy, mba hiala aminy izany. "Ary nandeha tamin'izany ora izany.
16:19 Fa ny tompony, nahita fa very ny fanantenany ny tombony lasa, nosamboriny i Paoly sy Silasy, dia nitondra azy ho any amin'ny mpanapaka any amin'ny fitsarana.
16:20 Ary manolotra azy ho an'ny governora, hoy izy ireo: "Ireo lehilahy ireo dia manelingelina ny tanànantsika, satria ny tenany ho Jiosy.
16:21 Ary izy ireo nanambara ny lalana izay tsy mety ho antsika ny manaiky na hataontsika, satria Romanina isika. "
16:22 Ary ny vahoaka nirohotra hamely azy. Ary ireo governora, nandrovitra ny mitondra akanjo, nasainy ho nokapohina tamin'ny tehina.
16:23 Ary nony efa nihatra maro ny fanindronana azy, dia hanipy azy any am-ponja, mampianatra ny mpiambina mba hiambina azy ireo tsara.
16:24 Ary satria efa nandray izany karazana mba, dia hatsipiny any amin'ny fonja anatiny, ary voafetra ny tongony ny hazo izy.
16:25 Avy eo, ao amin'ny misasakalina, I Paoly sy Silasy, dia nivavaka sy nidera an'Andriamanitra. Ary izay ao amin'ny trano-maizina koa nihaino azy.
16:26 Na izany aza tena, nisy horohoron-tany tampoka, lehibe tokoa ny fanorenan'ny trano-maizina nafindra. Ary niaraka tamin'izay ny varavarana rehetra nisokatra, ary ny bindings ny rehetra navotsotra.
16:27 Avy eo ny mpiambina fonja, rehefa jarred Mifohaza, ka nahita ny varavaran'ny trano-maizina hanokatra, nanatsoaka ny sabany, ary nikasa hamono tena, satria nataony fa efa nandositra ny mpifatotra.
16:28 Fa Paoly niantso tamin'ny feo mahery, nanao hoe:: "Ataovy manisy ratsy ny tenanao, fa ato ihany izahay rehetra!"
16:29 Dia miantso ho fahazavana, dia niditra tao. sady tora-kovitra, dia niankohoka teo anoloan'ny tongotr'ilay Paoly sy Silasy.
16:30 Ary nitondra azy teo ivelan'ny, hoy izy:, "Ry tompokolahy ô, inona no tokony hataoko, ka mba ho voavonjy?"
16:31 Dia hoy izy ireo:, "Minoa ny Tompo Jesosy, ary avy eo dia ho voavonjy, amin'ny ny ankohonanao. "
16:32 Ary izy roa lahy nitory ny Tenin'ny Tompo taminy, miaraka izay rehetra tao an-tranony.
16:33 ary, nitondra azy ireo ao amin 'ny ora amin'ny alina, nanasa ny fanindronana. Ary natao batisa, ary manaraka ny ankohonany manontolo.
16:34 Ary rehefa nitondra azy ho any an-tranony, dia napetrany latabatra ho azy ireo. Ary izy mahafaly, mbamin'ny ankohonany manontolo, nino an'Andriamanitra.
16:35 Ary nony efa tonga daylight, ireo governora dia naniraka ny mpanompony, nanao hoe:, "Afaho ireo olona ireo."
16:36 Fa ny mpiambina fonja nilaza izany teny izany tamin'i Paoly: "Ireo governora efa naniraka ianao no navoaka. Koa ankehitriny, miala. Mandehana soa aman-tsara. "
16:37 Fa hoy Paoly taminy:: "Efa nokapohiny tsy antsika ampahibemaso, na dia tsy voaheloka izahay. Efa nanary lehilahy kanefa Romana tao an-tranomaizina. Ary ankehitriny izy ireo dia nandroaka anay hiala mangingina? tsy izany. Fa tsy, aoka izy ihany ho hankatỳ handroso,
16:38 ary aoka isika handroaka azy ireny. "Ary ny mpanompo nilaza izany teny izany tamin'ireo governora. Ary rehefa nandre fa Romana izy roa lahy, dia raiki-tahotra.
16:39 ary tonga, dia niangavy azy ireo, Ary rehefa nentiny nivoaka, dia niangavy azy mba hiala ao an-tanàna.
16:40 Ary nony niala an-tranomaizina ka niditra tao an-tranon'i Lydia. Ary rehefa nahita ny rahalahy, dia nampionona azy ireo, ary avy eo dia niainga.
Asan'ny Apostoly 17
17:1 Ary rehefa nandeha namaky an'i Amfipolia sy Apolonia, dia tonga tao Tesalonika, ary nisy synagogan'ny Jiosy.
17:2 Ary Paoly, araka ny fanao, niditra tamin'izy ireo. Ary nandritra ny Sabata telo ka nifanditra tamin'izy ireo momba ny Soratra Masina,
17:3 nandika ary satria nataonay fa tsy maintsy ho ny Kristy nijaly sy nitsangana tamin'ny maty, ary fa "izany no i Jesoa Kristy, Izay no manambara aminareo. "
17:4 Ary ny sasany tamin'ireo dia nino ka nanampy ho isan'ny mpianatr'i Paoly sy Silasy, ary maro avy tamin'ireo no avy any amin'ny mpivavaka sy ny Jentilisa, ary tsy vitsy ireo vehivavy tsara.
17:5 Fa ny Jiosy, ho saro-piaro, ary nandray anjara amin'ny mpanao ratsy sasany teo anivon 'ny lehilahy iombonana, Niteraka korontana, Ary nampitaitra ny tanàna. Ary maka toerana akaikin'ny tranon'i Jason, nitady mba hitarika azy ho any amin'ny vahoaka.
17:6 Ary rehefa tsy nahita azy, dia nisarika an'i Jasona sy ny rahalahy sasany ho any amin'ny lehiben'ny tanàna, niantso mafy: "Fa izao no ireo izay efa nanome fo ny tanàna. Ary tonga teto,
17:7 ary Jason efa nandray azy ireo. Ary ny olona rehetra ireo manohitra ny tenin'i Kaisara, izy milaza fa misy mpanjaka hafa, I Jesosy. "
17:8 Ary nampirisika ny olona. Ary ny mpanapaka ny tanàna, rehefa nandre ireo zavatra ireo,
17:9 Ary rehefa nahazo fanazavana avy Jason sy ny hafa, nafahana izy ireo.
17:10 Na izany aza tena, avy hatrany ireo rahalahy naniraka Paoly sy Silasy tamin'ny alina hankany Beria. Ary nony efa tonga, dia niditra tao amin'ny synagogan'ny Jiosy.
17:11 Fa izao no tsara kokoa noho ireo izay tao Tesalonika. Satria nandray ny teny tamin'ny hafanam-po rehetra, nandinika ny Soratra Masina isan'andro mba hahitana raha marina izany,.
17:12 ary tokoa, maro no nino ao aminy, ary koa tsy vitsy teo anivon 'ny manan-kaja hafa firenena lehilahy sy ny vehivavy.
17:13 Avy eo, raha ren'ny Jiosy tany Tesalonika efa tsapako fa ny Tenin'Andriamanitra koa dia nitory Paoly tany Beria, dia lasa any koa, hampisy ary manelingelina ny vahoaka.
17:14 Ary avy eo dia nandefa haingana ny rahalahy i Paoly izy, ka mba handeha amin'ny ranomasina. Fa Silasy sy Timoty kosa nijanona tao.
17:15 Dia ireo izay nitarika an'i Paoly dia nitondra azy nankany Atena. Ary rehefa nahazo baiko avy aminy ho any Silasy sy Timoty, mba tonga teo aminy haingana, dia niainga.
17:16 Ary raha i Paoly niandry azy tany Atena, ny fanahiny dia taitra ny ao am-pony, nahita ny tanàna natolotra fanompoan-tsampy.
17:17 Ary noho izany, dia niady hevitra tamin'ny Jiosy tao amin'ny synagoga, sy ny mpivavaka, ary amin'ny toeram-bahoaka, mandritra ny andro tsirairay, Izay anankiray teo.
17:18 Ary sasany Epikoreana sy ny filozofa stôika dia niady hevitra taminy. Ary ny sasany dia nanao hoe:, "Inona no manao izany mpamafy ny Teny te-hilaza?"Kanefa sasany:, "Toa ho filazana vaovao demonia." Fa dia nanambara taminy sy ny fitsanganana amin'ny maty i Jesosy.
17:19 Ary apprehending azy, dia nitondra azy ho any Areopago, nanao hoe:: "Moa ve isika afaka mahafantatra izany fampianarana vaovao lazainao izany, momba izay miteny?
17:20 Fa hitondra ny sasany hevi-baovao ny sofinay. Ary noho izany dia te ho fantatra izay hevitr'izany zavatra izany. "
17:21 (Fa ny Ateniana rehetra, ary tonga ireo mpitsidika, dia nipetraka ny tenany amin'ny inona akory fa miteny na mandre hevi-baovao isan-karazany.)
17:22 fa Paoly, nitsangana teo afovoan'ny Areopago, nanao hoe:: "Ry Atenianina, Hitako fa amin'ny zava-drehetra ianao fa finoanoam-poana.
17:23 Fa toy ny mandalo aho ary nahatsikaritra ny sampinareo, Izaho koa nahita alitara, izay nisy soratra: HO AN'IZAY ANDRIAMANITRA TSY FANTATRA. Noho izany, izay mivavaka amin'ny tsy fahalalana, izany no toriko aminareo:
17:24 ny Andriamanitra izay nanao izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy, ny iray dia ny Tompon'ny lanitra sy ny tany, izay tsy mitoetra ao anaty tempoly nataon-tanana.
17:25 Sady tsy mba tompoin'ny an-tànan'ny olona, toy ny hoe mila na inona na inona, satria Izy no manome izao rehetra izao aina sy ny fofonaina ny zavatra sy ny zavatra hafa rehetra.
17:26 Ary nataony, avy tamin'ny iray, samy isam-pianakaviana ny olona: ho velona eto ambonin 'ny tany manontolo, famaritana ny fotoam-pivavahana sy ny faritry ny fonenany,
17:27 mba hitady an'Andriamanitra, angamba raha mba hihevitra azy na hahita Azy, kanefa tsy mba lavitra antsika rehetra.
17:28 'Fa Izy no ivelomantsika, ary ny hetsika, ary isiantsika. "Toy ny sasantsasany avy aminao manokana mpanao tonon-kira manao hoe:. 'Fa isika koa ny fianakaviany.'
17:29 Noho izany, satria isika 'ny fianakavian' Andriamanitra, tsy tokony hihevitra volamena na volafotsy na vato sarobidy, na ny soratra voasokitra ny zavakanto sy ny saina ny olona, mba ho fanehoana ny zava-Masina.
17:30 ary tokoa, Andriamanitra, dia nijery nidina hamangy ny tsi-fahalalan'ny fotoana izao, dia nanambara ny olona ankehitriny fa ny olona rehetra na aiza na aiza tokony hanao asa fivalozana.
17:31 Fa Izy efa nanendry andro iray izay hitsarany izao tontolo izao amin'ny hitsiny, amin'ny alalan'ny lehilahy iray voatendriny, nanolotra ny finoana rehetra, tamin'ny nananganany Azy tamin'ny maty. "
17:32 Ary rehefa nandre momba ny fitsanganana amin'ny maty, tokoa, ny sasany dia naneso, ny sasany kosa nanao hoe:, "Tsy dia hihaino anao ny amin'izany indray."
17:33 Ary Paoly dia niala teo aminy.
17:34 Na izany aza tena, ny olona sasany, manaraka azy, nino. Anisan'izany koa Dionysio Areopagita, sy ny vehivavy anankiray atao hoe Damary, ary ny sasany koa.
Asan'ny Apostoly 18
18:1 Rehefa afaka izany,, rehefa niala tany Atena, dia tonga tany Korinto.
18:2 Ary teo nahita Jiosy anankiray atao hoe Akoila, teraka tany Ponto, izay vao tonga avy tany Italia, ary Prisila vadiny, (fa Klaodio efa nandidy ny Jiosy rehetra hiala tany Roma,) nihaona tamin'izy ireo.
18:3 Ary satria niray raharaha, dia nitoetra tao aminy ka niasa. (Izao izy ireo dia mpanao tranolay no anton'asany.)
18:4 Ary izy niady hevitra tao amin'ny synagoga isan-tsabata izay, fampidirana ny anaran 'ny Tompo Jesoa. Ary izy nampanaiky ny Jiosy sy ny jentilisa.
18:5 Ary rehefa Silasy sy Timoty, dia tonga avy tany Makedonia, Paoly Nivadika tao ny Teny, nanambara tamin'ny Jiosy fa i Jesoa no Kristy.
18:6 Fa satria izy ireo mifanohitra azy sy niteny ratsy, dia nanopakopa-fitafiany ka nanao taminy hoe: "Ny ra ihany no eo amin'ny loha. Afaka aho. Manomboka izao, Handeha ho any amin'ny jentilisa. "
18:7 Ary raha niala ny toerana, dia niditra tao an-tranon'ny lehilahy anankiray, atao hoe Titosy Marina, mpivavaka 'Andriamanitra, trano izay efa nifanolotra tamin'ny synagoga.
18:8 Ary Krispo, ny mpitarika ny synagoga, dia nino ny Tompo, ny trano iray manontolo. Ary maro koa ny Korintiana, eo fandrenesana, nino ka natao batisa.
18:9 Ary ny Tompo niteny tamin'i Paoly, amin'ny alalan'ny fahitana tao amin'ny alina: "Aza matahotra. Fa tsy, miteny ary aza mangina.
18:10 Fa Izaho momba anao. Ary tsy misy olona hihazona anao, mba hanao ratsy anao. Fa maro ny olona ao amin'ity tanàna ity no amiko. "
18:11 Dia nanorim-ponenana tany nandritra ny herintaona sy enim-bolana, nampianatra ny tenin'Andriamanitra teo aminy.
18:12 Fa raha Galio no governora tany Akaia, ny Jiosy ka nitsangana niray an'i Paoly. Dia nitondra azy ho any amin'ny fitsarana,
18:13 nanao hoe:, "Izy mandresy lahatra ny olona hivavaka amin'Andriamanitra, nefa tsy araka ny lalàna."
18:14 Avy eo, i Paoly rehefa nanomboka hiloa-bava, Dia hoy Galio tamin'ny Jiosy: "Raha izany no misy resaka tsy rariny, na ny ratsy fanahy asa, O Jiosy ambony, Hanohana anao aho, araka izay mety.
18:15 Fa raha izao no tena fanontaniana momba ny teny sy anarana ary ny lalànao, tokony hahita azy ny tenanareo. Tsy ho ny hitsara izany raharaha izany. "
18:16 Dia nasain'i Jesosy hiala teo anoloan'ny fitsarana.
18:17 anefa izy ireo, apprehending Sostena, ny mpitarika ny synagoga, nikapoka azy teo anoloan'ny fitsarana. Ary tsy naneho fiahiana Galio izany zavatra izany.
18:18 Na izany aza tena, Paul, rehefa avy nitoetra ho andro maromaro, Ary rehefa nilaza veloma ny rahalahy, niondrana an-tsambo ho any Syria, ary ny fehiny dia Prisila sy Akoila. Ary efa nanaratra ny lohany tao Kenkrea, fa efa nanao voady.
18:19 Ary tonga tany Efesosy, Ary nandao azy teo aoriana. Na izany aza tena, izy no, niditra tao amin'ny synagoga, dia niady hevitra tamin'ny Jiosy.
18:20 Avy eo, na dia nangataka azy mba hijanona elaela kokoa ho, dia tsy manaiky.
18:21 Fa tsy, nanao hoe: veloma sy nilaza azy ireo, "Mbola hiverina atỳ aminareo indray, Raha sitrak'Andriamanitra,"Dia niainga niala tany Efesosy.
18:22 Ary rehefa midina any Kaisaria, dia niakatra tany Jerosalema, ary niarahaba ny Fiangonana tany, ary avy eo dia nidina nankany Antiokia.
18:23 Ary rehefa nandritra ny fotoana lava teo, dia niainga, Ary nandeha mba nitety ny tany Galatia sy Frygia, nampahery ny mpianatra rehetra.
18:24 Ary nisy Jiosy anankiray atao hoe Apollo, izay teraka tany Aleksandria, lehilahy nahay nandaha-teny izay mahery ny Soratra Masina, tonga tany Efesosy.
18:25 Ary nampianarina ny lalan'ny Tompo. Ary nafana fo, dia niteny sy nampianatra izay zavatra 'i Jesoa, fa mahafantatra afa-tsy ny batisan'i Jaona.
18:26 Ary noho izany, izy vao hanao zavatra amim-pahatokiana tao amin'ny synagoga. Ary rehefa Prisila sy Akoila nandre azy, dia nanohina Azy hitanila kely ka nanazava ny lalan 'ny Tompo azy bebe kokoa tsara.
18:27 Avy eo, satria te ho any Akaia, ireo rahalahy nanoratra ny fampirisihana ho any amin'ny mpianatra, ka dia mba hanaiky azy. Ary rehefa tonga, dia natao maro resaka amin'ny olona efa nino.
18:28 Fa izy dia mananatra mafy sy ampahibemaso ny Jiosy, amin'ny alalan'ny fanambarana tamin'ny alalan'ny Soratra Masina fa i Jesoa no Kristy.
Asan'ny Apostoly 19
19:1 Ary nitranga fa, raha mbola tany Korinto Apollo, Paul, rehefa nandeha ny alalan 'ny faritra ambony, tonga tany Efesosy. Ary dia nihaona tamin'ny mpianatra sasany.
19:2 Ary hoy Izy taminy:, "Rehefa avy finoana, no nandray ny Fanahy Masina?"Fa hoy izy ireo taminy, "Tsy izahay na dia reko fa misy ny Fanahy Masina."
19:3 Na izany aza tena, hoy izy:, "Ary inona no no natao batisa?"Ary hoy izy ireo:, "Ny batisan'i Jaona."
19:4 Ary hoy i Paoly: "Jaona nanao batisa ny olona ny batisan'ny fibebahana, hoe mba mino an'Ilay tsy ho avy hanaraka azy, izany hoe, an'i Jesosy. "
19:5 Rehefa nandre ireo zavatra ireo, dia natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Tompo.
19:6 Ary rehefa Paoly efa nametraka ny tànany taminy Izy, ny Fanahy Masina dia tonga azy. Ary izy ireo dia niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy naminany.
19:7 Ary ny lehilahy tokony ho roa ambin'ny folo amin'ny rehetra.
19:8 Avy eo, eo niditra tao amin'ny synagoga, dia niteny tamim-pahatokiana nandritra ny telo volana, niady hevitra ka nampanaiky azy ireo momba ny fanjakan'Andriamanitra.
19:9 Fa rehefa lasa nanamafy ny sasany ary tsy nety nino, manozona ny lalan 'ny Tompo eo anatrehan' ny vahoaka, Paul, nialany azy, ny mpianatra nitokana, niady hevitra isan'andro tao amin'ny trano fampianaran'i Tyrano sasany.
19:10 Ankehitriny dia izany no natao nandritra ny roa taona, ka dia rehetra izay nonina tany Asia nihaino ny Tenin'ny Tompo, ny Jiosy sy ny hafa firenena.
19:11 Ary Andriamanitra dia manatanteraka fahagagana mahery sy vitsy 'ny tanan' i Paoly,
19:12 loatra ka na dia kely sy paty lamba nentina avy any ny tenany ho ny marary, ny aretina nisaraka taminy sy ny fanahy ratsy niala.
19:13 Avy eo, na dia ny sasany amin'ireo mpitety exorcists Jiosy efa nanandrana mangataka ny anaran'i Jesosy Tompo noho ireo izay nanana ny fanahy ratsy, nanao hoe:, "I hamatotra anao amin'ny fianianana amin'ny alalan'i Jesosy, Nitory i Paoly izay. "
19:14 Ary nisy Jiosy sasany, ny fito lahy zanak'i Skeva, mpitarika amin'ny mpisorona, izay manao zavatra toy izany.
19:15 Ary ny fanahy ratsy namaly ka nanao taminy: "Fantatro i Jesosy, ary Paul Fantatro. Fa iza moa ianao?"
19:16 Ary ralehilahy, izay nisy fanahy ratsy, niantsambotsambotra amin'ny azy ireo sy nahazo ny tsara kokoa ny roa tonta, naharesy azy, dia nandositra avy izany trano izany, sady nitanjaka no voaratra.
19:17 Ary noho izany, fantatry ny rehetra ny Jiosy sy ny hafa firenena izay nonina tany Efesosy. Ary ny raiki-tahotra ny olona rehetra. Ary ny anaran 'ny Tompo Jesosy dia nankalaza.
19:18 Ary maro no tonga mpino, niaiky, ary nanambara ny asany.
19:19 Ary maro ireo izay nanaraka hafahafa sekta niara-nitondra ny boky, ka nandoro azy teo imason'ny olona rehetra. Ary rehefa avy famaritana ny hasarobidin'ny ireo, dia nahita ny vidiny ho dimy alina denaria.
19:20 Amin'izao fomba izao, ny Tenin'Andriamanitra dia tsy mitsaha-mitombo mafy ary ho voamarina.
19:21 Avy eo, rehefa vita izany zavatra vita, Nanapa-kevitra i Paoly ao amin'ny Fanahy, rehefa avy nita hamaky an'i Makedonia sy Akaia, hankany Jerosalema, nanao hoe:, "Ary, rehefa tonga any aho, dia ilaina ho ahy mba hahita an'i Roma koa. "
19:22 Fa fandefasana ny roa lahy tamin'izay nanompo azy, Timoty sy Erasto, ho any Makedonia, izy kosa nijanona nandritra ny ela any Asia.
19:23 Ary tamin'izany andro izany, dia nitranga tsy nisy korontana kely ny amin'izany fampianarana izany ny Tompo.
19:24 Fa nisy lehilahy anankiray atao hoe Demetrio, volafotsy volafotsy manao sarin'ny tempolin'i Diana, dia manome tsy misy harena be mpiasa.
19:25 Ary niantso azy ireo, amin'ireo izay niasa Toy izany koa, hoy izy:: "Men, fantatrao fa ny fidiram-bola avy amin'ity asa tanana.
19:26 Ary ianao no mahita, ary mandre fa io lehilahy io i Paoly, amin'ny alalan'ny fandresen-dahatra, efa niova ho lasa nisy vahoaka betsaka, tsy avy tany Efesosy, fa avy amin'ny efa ho Asia rehetra, nanao hoe:, "Izany zavatra izany dia tsy andriamanitra izay efa nataon-tanana. '
19:27 Dia toy izany no, Tsy vitan'ny hoe ity, ny fibodoana, -doza ny ho nampidirina ho ao an fanipahana marindrano, fa ny tempolin'i Diana lehibe ho malaza toy ny na inona na inona! Ary na dia ny fahalehibiazany, izay Asia rehetra sy izao tontolo izao fanompoam-pivavahana, dia hanomboka ho rava. "
19:28 Rehefa nandre izany, dia feno fahatezerana, dia niantso izy, nanao hoe:, "Lehibe Dianan'ny Efesiana!"
19:29 Ary ny tanàna dia feno tabataba. Ary rehefa nisambotra an'i Gaio sy Aristarko Makedoniana, namany Paoly, haingana izy ireo herisetra, niray, ho any an-fanaovana fampisehoana.
19:30 Avy eo, i Paoly rehefa te-hiditra ho any amin'ny olona, ny mpianatra fa tsy hamela azy.
19:31 Ary ny sasany tamin'ny mpitarika avy any Asia, izay sakaizany, koa dia naniraka hankeo aminy, mangataka mba tsy hiseho eo amin'ny fanaovana fampisehoana.
19:32 Fa ny sasany niantso zavatra isan-karazany. Ary ny amin'ny fiangonana tany fifanjevoana, ary maro tsy nahalala ny antony dia efa novorina.
19:33 Dia nitarika Alexander avy amin'ny vahoaka, raha ny Jiosy loatra ny azy handroso. ary Alexander, fihetsika amin'ny tànany noho ny fahanginan'ny, Te hanome fanazavana ny olona.
19:34 Fa raha vao tonga saina izy ireo azy ho Jiosy, rehetra niredona, tokony ho ora roa, niantsoantso, "Lehibe Dianan'ny Efesiana!"
19:35 Ary ny mpanora-dalàna dia nampitony ny vahoaka, hoy izy:: "Ry lehilahy Efesiana, ankehitriny, iza no olona tsy mahalala fa ny tanànan'ny Efesiana no ao amin'ny fanompoana ao amin'ny Diana lehibe sy ny taranak'i Jopitera?
19:36 Noho izany, satria ireo zavatra ireo dia tsy ho afaka nanohitra, tsy maintsy ho anao ny ho tony ka tsy hanao na inona na inona an-kamehana.
19:37 Fa nentinareo niainga ireo lehilahy ireo, izay tsy sacrilegious, na niteny ratsy ny andriamanitsika hamely.
19:38 Fa raha Demetriosa sy ny mpanefy izay momba azy manana raharaha ka misy olona, izy ireo dia afaka nivory tao amin'ny kianja,, ary misy proconsuls. Aoka izy ireo miampanga ny hafa.
19:39 Fa raha ta-hanadina ny momba ny zavatra hafa, izany dia azo nanapa-kevitra ao anatin'ny fivoriana ara-dalàna.
19:40 Fa ankehitriny isika ao mampidi-doza ny ho voaheloka ho fikomiana ny amin'izao fotoana izao ny zava-nitranga, satria tsy misy meloka (Izay manohitra dia afaka manome porofo) amin'ny fanangonana izany. "Ary rehefa nilaza izany teny izany, dia nampirava ny olona vory.
Asan'ny Apostoly 20
20:1 Avy eo, rehefa nitsahatra ny tabataba, Paul, miantso ny mpianatra ny tenany ka nananatra azy, hoy veloma. Ary niainga, ka mba nankany Makedonia.
20:2 Ary rehefa nandeha ny alalan 'ireo faritra ka efa nananatra azy tamin'ny toriteny maro, dia niditra tao an Gresy.
20:3 Ary rehefa nitoetra telo volana teo, treacheries no nikasa hamely azy noho ny amin'ny Jiosy, araka izay efa handeha an-tsambo ho any Syria. Ary rehefa nanoro hevitra ity, dia niverina namaky an'i Makedonia.
20:4 Ary ireo izay miaraka aminy dia Sopatera, ny zanak'i Pyro avy any Beria; ary koa ny Tesaloniana, Ary faharoa Aristarko; ary Gaio avy any Derbe, ary Timoty; ary Tykiko sy Trofimo avy koa ny avy any Asia.
20:5 Ireo, rehefa avy nandeha nialoha, niandry anay tany Troasy.
20:6 Na izany aza tena, dia niondrana an-tsambo avy tany Filipy, rehefa tapitra ny andro mofo tsy misy masirasira, ary ny dimy andro izahay, dia nankany aminy tany Troasy, tany no nitoeranay hafitoana.
20:7 Avy eo, amin'ny Sabata voalohany, nony niara-niangona hamaky mofo izahay, Paoly nitori-teny taminy, nikasa hametraka ny ampitso. Fa maro ny toriteny tao an-mamatonalina.
20:8 Ary nisy jiro be dia be tao amin'ny efitra ambony, izay tafangona.
20:9 Ary nisy zatovo anankiray atao hoe Eotyka, nipetraka teo am-baravarankely Sill, dia rehefa vesaran'ny ny mavesatra faharendremana (fa Paoly nitory ela). Avy eo, tamin'izy lasa natory, dia lavo avy amin'ny rihana fahatelo efitra midina. Ary rehefa nanopy, fa maty izy.
20:10 I Paoly efa nidinany ho any aminy, Izy no nanolotra ny tenany sy ny azy, nanohona azy ka, nanao hoe:, "Aza manahy, fa ny fanahiny dia mbola ao anatiny. "
20:11 Ary noho izany, miakatra, ary namaky mofo, ary nihinana, Ary nony efa nitory mandra-mazava tsara amin'ny, Avy eo izy dia niainga.
20:12 Ary izy ireo nitondra ilay zatovo efa velona, ka dia mihoatra noho ny kely nampionona.
20:13 Sambo izahay avy eo niakatra ny sambo dia niondrana nankany Aso, izay no handraisana an'i Paoly. Fa izany ihany no nanapa-kevitra izy, satria izy no nanao ilay dia an-tanety.
20:14 Ary rehefa niaraka taminay tany Aso, dia naka azy tao, ary nankany Mitylena.
20:15 Ary rehefa nandeha niala teo, amin'ny andro manaraka, izahay, dia tonga tandrifin'i Kio. Ary manarakaraka io dia niantsona tao Samos. Ary amin'ny andro manaraka dia nandeha tany Mileto izahay.
20:16 Fa Paoly efa nanapa-kevitra handeha an-tsambo handalo any Efesosy, ka dia tsy ho ela any Asia. Fa izy haingana mba, raha azo atao ho azy, mba hitandrina ny andro Pentekosta any Jerosalema.
20:17 Avy eo, naniraka tany Mileto Paoly, tany Efesosy, dia niantso ireo lehibe kokoa ara-pahaterahana ao amin'ny Fiangonana.
20:18 Ary rehefa tonga tao aminy izy ireo ary niara-, dia hoy izy taminy: "Fantatrareo fa hatramin'ny andro voalohany rehefa niditra tao Asia, No nitoerako tany aminao, fa ny andro iray manontolo, izany no fomba:
20:19 fanompoana ny Tompo, amin'ny fanetren-tena rehetra sy ny ranomaso ary na dia teo aza ny fakam-panahy izay nanjo ahy amin'ny treacheries ny Jiosy,
20:20 natao indray ny fomba na inona na inona izay ny vidiny, Ahoana tsara no nitory taminareo, ary efa nampianariko anareo teo imason'ny olona ary manerana ny trano,
20:21 ary nambarako tamin'ny Jiosy sy ny hafa firenena momba ny fibebahana amin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesosy Kristy Tompontsika.
20:22 Ary ankehitriny, indro, rehefa voatery am-panahy, Alehako ho any Jerosalema, tsy fantatro izay hanjo ahy any,
20:23 afa-tsy ny Fanahy Masina, nitety ny tanàna, efa nampitandrina aho, nilaza fa gadra sy fahoriana miandry ahy tany Jerosalema.
20:24 Tsy misy atahorako anefa izany zavatra izany. Izaho kosa tsy mihevitra ny fiainako ho sarobidy kokoa noho izany no manokana, raha toa fa amin'ny fomba mba hahatanteraka ny tiany hatao sy ny an'ny asa fanompoana ny Teny, izay noraisiko tamin'i Jesosy Tompo, mba hanambara ny filazantsaran'ny fahasoavan'Andriamanitra.
20:25 Ary ankehitriny, indro, Fantatro fa ianao dia tsy hahita ny tavako intsony, ianareo rehetra eo izay nandeha, nitory ny fanjakan'Andriamanitra.
20:26 Izany no antony, Miantso anao aho ho vavolombelona amin'io andro io: fa Izaho no afaka amin'ny ran'ny rehetra.
20:27 Fa tsy mba noravana tamin'ny kely indrindra amin'ny nanambara fikasan'Andriamanitra rehetra aminareo.
20:28 Karakarao ny tenanareo sy ny ondry rehetra, ny izay ny Fanahy Masina no nametraka anao toy ny eveka mba hitondra ny Fiangonana 'Andriamanitra, izay novidiny tamin'ny rany.
20:29 Fantatro fa rehefa lasa aho dia amboadia mitoha izy no hiditra eo aminareo, tsy hiantra ny ondry.
20:30 Ary ho eo aminareo, ny olona hitsangana, miresaka zava-dratsy, mba hitaona ny mpianatra hanaraka azy.
20:31 Noho io, ho mailo, fihazonana ho fahatsiarovana fa nandritra ny telo taona dia tsy nitsahatra, andro aman'alina, -dranomaso, mba mananatra tsirairay avy aminareo.
20:32 Ary ankehitriny, Izaho manolotra anareo ho amin'Andriamanitra sy ho amin'ny tenin'ny fahasoavany. Manana ny hery mba hanangana, ary ny manome lova amin'izay rehetra nohamasinina.
20:33 Tsy mba naniry volafotsy sy ny volamena tsy, na fitafiana,
20:34 tahaka ny fantatrareo ihany. Fa izay nilaina amin 'ny alalako sy ny momba ahy, ireto tanako ireto no nanome.
20:35 Izaho efa nilaza taminareo ny zavatra rehetra, satria ny niasa toy izany, dia ilaina ny hanohana ny malemy ka hahatsiaro ny tenin'i Jesosy Tompo, izay nolazainy hoe, 'Mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray.' "
20:36 Ary rehefa nilaza izany, nandohalika, dia niara-nivavaka tamin'izy rehetra.
20:37 Ary nitomany mafy izy rehetra nitranga. Ary, lavo teo amin'ny vozon'i Paoly, dia nanoroka azy,
20:38 sady nalahelo indrindra indrindra noho ny teny izay efa nolazainy, izy ireo fa tsy hahita ny tavany intsony. Dia nitondra azy ho any an-tsambo.
Asan'ny Apostoly 21
21:1 Ary rehefa afaka izany, nitranga, rehefa tsy fidiny nisaraka taminy, niondrana an-tsambo izahay, mazava ho azy mivantana, tonga tao Kosy, ary ny andro manaraka amin'ny Rhodes, dia niala tao nankany Patara.
21:2 Ary rehefa nahita sambo ho any Fenisia manerana, niakatra ambony sambo, dia niondrana an-tsambo.
21:3 Avy eo, rehefa avy nahita an'i Sipra, mitandrina izany ho amin'ny ankavia, dia niondrana an-tsambo ho any Syria tamin'ny, ary tonga tao Tyro. Fa ny sambo handeha notaterina ny entana ao.
21:4 Avy eo, rehefa nahita ny mpianatra, dia nitoetra tao mandritra ny fito andro. Ary izy ireo nanao hoe: Paoly, ny alalan 'ny Fanahy, mba tsy hiakatra any Jerosalema.
21:5 Ary rehefa tapitra ny andro dia vita, mametraka avy, dia nandeha; ary izy rehetra niaraka anay ny vady aman-janany, mandra-pahatonganay teo ivelan'ny tanàna. Ary nandohalika teo amin'ny amoron-dranomasina sy nivavaka.
21:6 Ary rehefa nilaza veloma nifampiresaka, dia niakatra ambony sambo ny sambo. Ary izy ireo niverina ho any ny.
21:7 Na izany aza tena, rehefa vita ny nandeha sambo avy tany Tyro, dia nidina nankany Ptolemaisa. Ary niarahaba ny rahalahy, dia nitoetra tao aminy andro iray.
21:8 Avy eo, rehefa avy fametrahana ny ampitso, dia tonga tany Kaisaria. Ary eo niditra tao an-tranon'i Filipo evanjelista, izay anankiray tamin'izy fito lahy, dia nitoetra tao aminy.
21:9 Ary izany lehilahy izany dia nanana vavy efatra, virjiny, izay maminany.
21:10 Ary raha naharitra ela izahay andro vitsivitsy, dia nisy mpaminany avy tany Jodia, atao hoe Agabo, tonga.
21:11 ary, rehefa tonga amintsika, nitondra ny fehin-kibon'i Paoly,, ary mampitambatra ny tongony aman-tanany, hoy izy:: "Izao no lazain'ny Fanahy Masina: Ny lehilahy izay fehikibo izany no, ny Jiosy no hamatotra toy izany tany Jerosalema. Ary dia hanolotra azy eo an-tànan'ny jentilisa izy. "
21:12 Ary rehefa nandre izany, dia izahay sy ireo izay avy amin'io toerana io nangataka taminy mba tsy hiakarany any Jerosalema.
21:13 Ary Paoly namaly tamin'ny hoe:: "Inona no hanatanteraka ny fitomaniana sy ny nampahory ny foko? Fa vonona aho, tsy ny hafatotra, fa ny ho faty any Jerosalema, ho voninahitry ny anaran'i Jesosy Tompo. "
21:14 Ary satria izahay dia tsy afaka nandresy lahatra azy, dia nampionona, nanao hoe:: "Aoka ny sitrapon'ny Tompo no hatao."
21:15 Avy eo, Rehefa afaka izany andro, rehefa nanao fiomanana, dia niakatra ho any Jerosalema.
21:16 Ary ny mpianatra sasany avy tany Kaisaria koa nandeha niaraka taminay, nitondra teo aminy ny anankiray atao hoe Mnason Cypriot, tena sady mpianatra, izay vahiny isika dia ho.
21:17 Ary nony efa tonga tany Jerosalema, ireo rahalahy nandray anay an-tsitrapo.
21:18 Avy eo, amin'ny andro manaraka, Paoly niditra amin'i Jakoba izahay. Ary ny loholona.
21:19 Ary rehefa niarahaba azy, dia nanazava zavatra tsirairay izay efa vita tany amin'ny jentilisa ny fanompoany.
21:20 ary izy ireo, rehefa nandre izany, nankalaza an'Andriamanitra sy nanao taminy hoe:: "Azonao, rahalahy, fa tsy omby alinalina misy ny Jiosy izay efa mino, ary izy rehetra, fatra-pitana ny lalàna.
21:21 Ankehitriny dia efa reko ny momba anao, fa izay ampianarinao ireo Jiosy izay any amin'ny jentilisa mba hiala Mosesy, nilaza azy ireo mba tsy hamora ny zanany, na hanao zavatra araka ny fomba amam-panao.
21:22 Inona no atao hoe manaraka? Ny vahoaka tokony nivory. Fa ho reny ny tonga.
21:23 Noho izany, hanao izany zavatra izany fa mangataka aminareo: Misy efa-dahy, izay olona manao voady.
21:24 Raiso ireo ary hamasino ny tenanao miaraka aminy, ary mitaky azy ireo hanaratra ny lohany. Ary avy eo no hahafantaran'ny olona rehetra fa ny zavatra izay efa reko ny momba anao sandoka, fa ianao aza mandeha amin'ny fitandremana ny lalàna.
21:25 Fa, ny amin'ireo jentilisa izay efa mino, dia efa nanoratra ny didim-pitsarana toy izany no hitandremany ny tenany avy amin'izay efa sorona ho an'ny sampy, sy ny ra, ary avy amin'izay efa sempotra, ary ny fijangajangana. "
21:26 Ary Paoly, nitondra ny olona tamin'ny andro manaraka, dia nanadio ny tenany niaraka taminy, ary dia niditra tao an-kianjan'ny tempoly, nanambara ny fizotry ny andro fanadiovana, mandra-pahatongan'ny fanatitra ho natolotra ho an'ny isan-olona izany.
21:27 Fa raha ny mofo fito andro dia mahatratra vita, ireo Jiosy izay avy any Asia, rehefa nahita azy tao amin'ny tempoly, nampirisika ny olona rehetra, dia nisambotra an'i Paoly, niantso mafy:
21:28 "Ry Israelita, Vonjeo! Io no lehilahy izay fampianarana, rehetra, na aiza na aiza, manohitra ny olona Isiraely sy ny lalàna sy ity fitoerana ity. Koa, Izy mihitsy aza ny hafa firenena nentiny ho ao an-kianjan'ny tempoly, Ary efa nandika ity fitoerana masina. "
21:29 (Fa efa hitany Trofimo, Efesiana, tao an-tanàna niaraka taminy, ary ka nataony fa nampidirin'i Paoly teo an-kianjan'ny tempoly azy.)
21:30 Ary ny tanàna manontolo dia nahatonga. Ary nony fa nihazakazaka nivory ny olona. Ary apprehending Paul, dia nitarika azy ho eny ivelan'ny amin'ny tempoly. Ary niaraka tamin'izay dia nikatona ny varavarana.
21:31 Avy eo, raha nitady hamono azy, nisy nilaza ny komandy ny andiana miaramila: "Jerosalema any rehetra very hevitra."
21:32 Ary noho izany, niaraka tamin'izay dia naka miaramila sy kapiteny, dia nihazakazaka nidina nankeo aminy. Ary rehefa nahita ny komandy sy ny miaramila, dia nitsahatra ny hamely an'i Paoly.
21:33 Ary ny komandy, manakaiky, nosamboriny izy, ary nanome baiko izy hamatotra ary tamin'ny gadra roa. Ary izy nanontany Iza moa izy, ary inona moa no nataony.
21:34 Ary izy ireo niantso ny zavatra isan-karazany ao anatin'ny vahoaka. Ary satria tsy hahazo na inona na inona tsara noho ny tabataba, dia nanome baiko izy mba ho entina any an-tanàna mimanda ny fandravana.
21:35 Ary rehefa tonga teo amin'ny tohatra, nony fa nentina niakatra teny an-miaramila, noho ny fandrahonana ny herisetra avy amin'ny vahoaka.
21:36 Fa ny olona betsaka nanaraka ary niantso, "Haka Azy!"
21:37 Ary i Paoly dia nanomboka ho entina any amin'ny tanàna mimanda ny fandravana, dia hoy izy tamin'ny komandy, "Moa ve azo atao ho ahy ny miteny aminao?"Ary hoy izy:, "Fantatrareo teny grika?
21:38 Koa dia, moa tsy ilay Egyptiana izay talohan'izany andro izany dia nampirisika ny fikomiana ka nitarika ho any an-efitra efatra arivo lahy mpamono olona?"
21:39 Fa hoy Paoly taminy: "Izaho koa mba lehilahy, tokoa Jiosy, avy any Tarsosy any Kilikia, ny olom-pirenena ny iray tanàna malaza. Noho izany dia mangataka anao, aoka aho mba hiteny amin'ny olona. "
21:40 Ary rehefa nanome azy alalana, Paul, nitsangana teo amin'ny ambaratonga, nanofa amin'ny tànany tamin'ny olona. Ary rehefa lehibe nitranga fahanginana, no nolazainy taminy tamin'ny teny Hebreo, nanao hoe::
Asan'ny Apostoly 22
22:1 "Noble rahalahy sy ianareo ray, hihaino ny fanazavana izay omeko anareo izao. "
22:2 Ary rehefa nandre azy niteny taminy tamin'ny teny Hebreo, dia nanatitra fahanginana lehibe kokoa.
22:3 Ary hoy izy:: "Izaho dia Jiosy olona, teraka tany Tarsosy any Kilikia, fa hatsangana amin'ity tanàna ity teo akaikin'ny tongotr'i Gamaliela, nampianarina araka ny fahamarinana ny lalàna avy tamin'ny razana, fatra-pitana ny lalàna, tahaka anareo rehetra koa no mandraka androany.
22:4 Nanenjika izany fampianarana izany aho, na dia ho amin'ny fahafatesana, mampitambatra ary nanolotra an-trano-maizina na lahy na vavy,
22:5 tahaka ny mpisoronabe sy ny lehibe rehetra amin'ny alalan'ny fahaterahana vavolombelona ho ahy. Rehefa nahazo taratasy avy amin'izy ireo ho any amin'ny rahalahy, Dia nandeha ho any Damaskosy, ka mba hitondra azy mifatotra ho any Jerosalema avy tany, ka mba ho voasazy.
22:6 Fa izany no nitranga fa, araka nandeha aho ka nanakaiky Damaskosy amin'ny mitataovovonana, tampoka avy any an-danitra mazava lehibe nanelatrelatra manodidina ahy.
22:7 Ary lavo tamin'ny tany, Dia nandre feo nilaza tamiko, 'Saoly, Saul, nahoana no manenjika ahy ianao?'
22:8 Ary namaly, 'Iza ianao, Tompo?'Ary hoy Izy tamiko:, 'Izaho no Jesosy avy any Nazareta, izay enjehinao. '
22:9 Ary izay niaraka tamiko, tokoa, nahita ny mazava, nefa tsy nihaino ny feon 'izay niresaka tamiko.
22:10 Ary hoy izaho:, 'Inona no tokony hataoko, Tompo?'Dia hoy ny Tompo tamiko: 'Mitsangàna, ka mandehana ho any Damaskosy. ary, dia ho nilaza izany rehetra fa tsy maintsy atao. '
22:11 Ary satria tsy nahita aho, noho ny famirapiratan'ny izany hazavana izany, I nentin'ny tanana amin'ny namako, ary nankany Damaskosy.
22:12 Avy eo dia nisy anankiray atao hoe Ananiasy, ny olona, ​​araka ny lalàna, manana ny fijoroana ho vavolombelona momba ny Jiosy rehetra izay nonina teo,
22:13 manakaiky ahy, ary nitsangana teo akaiky ny, hoy izy tamiko, 'Ry Saoly rahalahy, jereo!'Ary tamin'izany ora izany, Nijery azy aho.
22:14 Fa hoy izy:: 'Ny Andriamanitry ny razantsika efa preordained anao, mba ho avy hahafantatra ny sitrapony sy hahita ny Marina, ka dia nandre ny feo avy amin'ny vavany.
22:15 Fa ianao no ho vavolombelony amin'ny olona rehetra ny amin'ireo zavatra izay efa hitanao sy renao.
22:16 Ary ankehitriny, Nahoana no mangataka andro? Mitsangàna, ary aoka hatao batisa, ka hosasana ho afaka amin'ny fahotanao, amin'ny fanononany ny fiandrianam ny anarany. '
22:17 Avy eo dia nitranga fa, rehefa niverina tany Jerosalema aho ka nivavaka tao an-kianjan'ny tempoly, ny ara-tsaina tonga domelina ahy,
22:18 ka nahita Azy milaza amiko: 'Faingàna! Mialà haingana avy tany Jerosalema! Fa izy ireo tsy hanaiky ny fijoroanao ho vavolombelona momba ahy. '
22:19 Ary hoy izaho:: 'Tompo ô, dia fantany fa Izaho no nikapoka sy hihodidina any am-ponja, nitety ny synagoga, ireo izay efa nino ianao.
22:20 Ary raha nalatsaka ny ran'i Stefana vavolombelona ny alatsaka, Nitsangana teo akaiky teo aho, ary nankasitraka, ary nijery ny amin'ny fitafiana izay namono azy. '
22:21 Ary hoy izy tamiko, 'Mivoaha. Fa Izaho maniraka anareo ho lavitra ny firenena. ' "
22:22 Ary izy ireo nihaino azy, mandraka teny, ary avy eo dia nanandratra ny feony, nanao hoe:: "Ento toy izany hiala amin'ny tany! Fa tsy tokony hatao ho azy ny miaina!"
22:23 Ary raha mbola niantso, ary ny fitafiany tossing manokana, sady namoaka vovoka ho amin'ny rivotra,
22:24 nanome baiko ny komandy ho entina ho ao an-tanàna mimanda ny fandravana, ary ho nokapohina sy nampijaliana, mba hahita ny antony fa izy ireo niantso toy izany hamely azy.
22:25 Ary rehefa namatotra azy amin'ny andilany, Dia hoy Paoly tamin'ny kapiteny izay nijanona teo azy, "Moa Mety aminareo va ny mikapoka lehilahy Romana izay, ary mbola tsy voaheloka?"
22:26 Rehefa nandre izany, ny kapiteny nandeha tany amin'ny komandy, ary nilaza izany taminy, nanao hoe:: "Inona no mikasa ny hanao? Fa io lehilahy io olom-pirenena romanina. "
22:27 Ary ny komandy, manatona, hoy izy taminy:: "Teneno aho. Ve ianao Romana?"Dia hoy izy, "Eny."
22:28 Ary namaly ny komandy, "Nahazo ny zom-pirenena ity amin'ny vola be." Fa hoy Paoly:, "Fa aho no teraka ho azy."
22:29 Noho izany, ireo izay handeha hampijaly azy, niala taminy avy hatrany. Ny komandy dia toy izany koa natahotra, rehefa fantatro fa Romana izy olom-pirenena, satria efa nampamatotra azy izy.
22:30 Fa amin'ny andro manaraka, te hahita bebe kokoa ny zavatra tsara ny antony dia hoe nampangain'ny Jiosy, dia nalefany, ary nandidy ny mpisorona mba nivory, amin'ny filan-kevitra iray manontolo. Ary, famokarana Paul, dia nametraka azy teo aminy.
Asan'ny Apostoly 23
23:1 Ary Paoly, nandinika tsara amin'ny filan-kevitra, nanao hoe:, "Noble rahalahy, Izaho no niteny tamin'ny fieritreretana tsara eo anatrehan'Andriamanitra, na dia izao ankehitriny. "
23:2 Ary ny mpisoronabe, Ananias, Nandidy ireo izay nijoro teo akaiky teo mba hamely ny vavany.
23:3 Ary hoy Paoly taminy:: "Andriamanitra dia hamely anao, ry rindrina voalalotra fotsy! Fa no mipetraka, ka hitsara ahy araka ny lalàna, rahoviana, tsy araka ny lalàna, ianao baiko ny hamelezana ahy?"
23:4 Ary ireo izay nijoro tsy lavitra teo hoe:, "Miteny ratsy ve ianao momba ny mpisoronabe 'Andriamanitra?"
23:5 Fa hoy Paoly:: "Izaho tsy nahalala, rahalahy, fa izy no mpisoronabe. Fa voasoratra: 'Aza miteny ratsy ny mpanapaka ny firenenao.' "
23:6 Ary Paoly, satria fantatrareo fa ny vondrona iray dia Sadoseo sy ny hafa teo ny Fariseo sasany, Hoy teo amin'ny Synedriona: "Noble rahalahy, Fariseo aho, ny zanaky ny Fariseo! Izany dia ny fanantenana sy ny fitsanganan'ny maty izay no itsarana ahy. "
23:7 Ary rehefa nilaza izany, nitranga teo ny nifanditra ny Fariseo sy ny Sadoseo. Ary ny olona maro nizara roa toko.
23:8 Fa ny Sadoseo milaza fa tsy misy fitsanganan'ny maty, ary na anjely, na fanahy. Fa ny Fariseo kosa manaiky izany avokoa ireo.
23:9 Avy eo nisy ny fitabatabana nitranga lehibe. Ary ny sasany tamin'ny Fariseo, eny, nifoha, dia niady, nanao hoe:: "Tsy hitanay izay helok'io lehilahy io. Ahoana raha misy fanahy no niteny taminy, na anjely?"
23:10 Ary satria nifanditra be efa natao, ny komandy, natahotra fa i Paoly mba ho rava ny azy ireo, baiko ny miaramila mba hidina sy hisambotra azy avy eo aminy, ary mba hitondra azy ho any amin'ny tanàna mimanda ny fandravana.
23:11 Avy eo, ny manaraka alina, ny Tompo nitsangana teo akaiky azy ka nanao hoe:: "Aoka ho tapaka. Fa toy efa nanambara momba ahy teto Jerosalema, dia tahaka izany koa ilaina ho anao ny mijoro ho vavolombelona any Roma. "
23:12 Ary rehefa tonga daylight, ny sasany tamin'ny Jiosy nivory ka niozona sy nianiana, nilaza fa tsy hihinana na hisotro raha tsy efa nahafaty an'i Paoly.
23:13 Ary nisy omby efa-polo lahy izay efa nandray izany fianianana miara-.
23:14 Dia nanatona ny lohan'ny mpisorona, ary ny anti-panahy, ka hoy izy:: "Ny tenantsika no efa nianiananay tamin'ny fianianana, mba ho hanandrana na inona na inona, ambara-pamononay an'i Paoly.
23:15 Noho izany, tamin'ny mpanolo-, izao dia tokony hanome filazana ny komandy, ka mba entiko miverina atỳ aminao, toy ny raha natao mba hamaritana zavatra hafa momba azy. Fa tsy mbola manatona, efa nanao fiomanana mba hamonoana azy ho faty. "
23:16 Ary rehefa fantatr'i Paoly zanakalahin'i anabavin'i efa nandre izany, momba ny famadihana, dia nandeha izy ka niditra tao amin'ny tanàna mimanda ny fandravana, ary nilaza izany tamin'i Paoly.
23:17 ary Paoly, miantso azy ny kapiteny anankiray, nanao hoe:: "Ento ity tovolahy ity ho any amin'ny komandy. Fa misy zavatra holazainy aminy. "
23:18 ary tokoa, dia naka azy ka nitondra azy ho any amin'ny komandy, ka hoy Izy:, "Paul, ny voafonja, nangataka ahy hitondra ity zatovo ity hanketo aminao, satria dia misy milaza aminareo. "
23:19 Ary ny komandy, nandray azy izy, niala teo aminy, Dia nanontany azy Jesosy: "Inona moa no tsy maintsy milaza amiko?"
23:20 Dia hoy izy:: "Ny Jiosy efa nihaona hangataka anao hampidina an'i Paoly ho any amin'ny Synedriona rahampitso, toy ny hoe izy ireo nikasa nanontany azy momba ny zavatra hafa.
23:21 fa tena, tsy tokony hino azy, fa izy ireo hamono azy amin'ny omby efa-polo lahy avy teo aminy, izay efa niozona amin'ny nianiana fa tsy hihinana, na misotro, raha tsy efa hamonoany Azy. Ary vonona izy ireo ankehitriny, manantena, hoy avy aminao. "
23:22 Ary avy eo ny komandy nampirava ny tovolahy, mampianatra azy tsy hilaza na iza na iza fa efa nambara azy ireo zavatra ireo.
23:23 Avy eo, dia niantso kapiteny roa lahy, dia hoy izy taminy: "Manomàna miaramila roan-jato, mba handeha hatrany Kaisaria, ary ny mpitaingin-tsoavaly fito-polo, ary ny roan-jato biby eny anaty zozoro, fa ny fahatelo ora amin'ny alina.
23:24 Ary hanomana biby mpitondra entana hitondra Paul, mba hitondra azy soa aman-tsara ho any amin'i Feliksa, ny governora. "
23:25 Fa raiki-tahotra, fandrao angamba ny Jiosy mba hisambotra azy sy hamono azy, ary rehefa afaka izany, dia ho nanendrikendrika, toy ny hoe efa nanaiky kolikoly. Ary noho izany dia nanoratra taratasy misy izao manaraka izao:
23:26 "Claudio Shuckburgh, ny mpanapaka tsara indrindra, Felix: fiarahabana.
23:27 io lehilahy io,, fa efa nahazo ny Jiosy sy ny efa tokony mba hatao maty ireny, I namonjy, izy ireny dia feno amin'ny miaramila, satria tsapako fa Romana.
23:28 Ary te hahalala ny antony fa dia nanohitra azy, Dia nitondra azy ho eo amin'ny Synedriona.
23:29 Ary nahita azy ho voampanga momba ny hevitra ny amin'ny lalàny. Na izany aza tena, na inona na inona tokony hahafaty na am-ponja dia ao anatin'ny fiampangana.
23:30 Ary rehefa nomena ny otrika vaovao, izay efa namboariny azy, Dia naniraka Azy ho aminareo, mampahafantatra ny mpiampanga koa, mba hisolo vava azy amin'ny fiampangana eo anatrehanao. Veloma. "
23:31 Ary noho izany ny miaramila, nitondra an'i Paoly, araka ny baiko, nentiny tamin'iny alina iny ho any Antipatria.
23:32 Ary ny andro manaraka, fandefasana ny mpitaingin-tsoavaly mba handeha hiaraka aminy, dia niverina ho any amin'ny tanàna mimanda ny fandravana.
23:33 Ary nony efa tonga tany Kaisaria ireo, dia efa nanolotra ny taratasy tamin'ny mpanapaka, izy ireo ihany koa ny nanolotra an'i Paoly ho eo anatrehany.
23:34 Ary rehefa novakiny ilay taratasy, ary nanontany izay zara-fanapahana nihaviany efa izy avy, fantany fa avy tany Kilikia, hoy izy::
23:35 "Dia hihaino anao, rehefa tonga ny mpiampanga no. "Dia nasainy nambenana tao anati-rova Heroda.
Asan'ny Apostoly 24
24:1 Avy eo, rehefa afaka hadimiana, Ananiasy mpisoronabe nidina tamin'ny sasany tamin'ireo anti-panahy sasany ary Tertylo iray, ny mpandahateny. Ary dia nankany amin'ny mpanapaka ny niampangany an'i Paoly.
24:2 Ary rehefa niantso an'i Paul, Tertylo niampanga Azy, nanao hoe:: "Tsara indrindra Felix, satria isika dia manana fiadanana be alalanao, ary ny zavatra maro mety ampy hananarana ny fitondran'Andriamanitra,
24:3 dia manaiky izany, foana ary na aiza na aiza, amin'ny asa-pisaorana amin'ny zavatra rehetra.
24:4 Fa fandrao hiteny be loatra ny halavany, Miangavy anao aho, noho ny famindrampo, hihaino anay vetivety.
24:5 Ity no efa hitanay lehilahy ho pestilent, ho fitarihana fisarahana ny Jiosy rehetra eto amin'izao tontolo izao, ary mba ho ny mpanoratra ny fikomiana ny antoko atao hoe Nazarena.
24:6 Ary izy mihitsy aza no nitady handika ny tempoly. Ary rehefa nosamboriny izy, dia naniry azy mba hotsaraina araka ny lalàna.
24:7 fa Lysia, ny komandy, dia feno herisetra lehibe antsika, keriny azy hiala ny tanana,
24:8 nandidy ny mpiampanga azy hankatỳ aminareo. avy azy, ianao dia afaka, tamin'ny nanamelohany izany rehetra izany, mba hahatakatra ny antony fa hiampangany Azy. "
24:9 Ary avy eo ny Jiosy interjected, nilaza fa izany no izy.
24:10 Avy eo, satria ny governora efa nanofa azy hiteny, namaly i Paoly: "Ny fahafantarana fa ianao dia efa mpitsara ny firenena ity nandritra ny taona maro, Homeko fanazavana mikasika ny tenako amin'ny fanahy manao ny marina.
24:11 Fa, rehefa mety tonga saina, efa ihany no efa roa ambin'ny folo andro izay no niakarako hivavaka tany Jerosalema.
24:12 Ary tsy nahita ahy niady hevitra an-kianjan'ny tempoly tamin'ny olona, na niteraka ny famoriam-bahoaka ny vahoaka: na tao amin'ny synagoga, na tao an-tanàna.
24:13 Ary izy ireo tsy afaka manaporofo aminareo ny zavatra momba izay miampanga ahy izao.
24:14 Fa izao no ekeko aminao, fa araka ny sekta, izay ataony hoe fitokoana, toy izany no anompoanareo ny andriamanitro sy ny Ray, mino izay rehetra voasoratra ao amin'ny Lalàna sy ny Mpaminany,
24:15 manana fanantenana an'Andriamanitra, izay tenany ihany koa ireo olon-kafa manantena, fa hisy ho avy fitsanganan'ny marina sy ny tsy marina.
24:16 Ary amin 'izany, Izaho miezaka foana mba hanana feon'ny fieritreretana izay tsy manam-misy heloka eo anatrehan'Andriamanitra, na amin'ny olona.
24:17 Avy eo, taorian'ny taona maro, Nandeha ho an'ny fireneko, hitondra fiantrana sy fanatitra sy voady,
24:18 amin'ny alalan'ny fanadiovana izay nahazo an-kianjan'ny tempoly: na amin'ny vahoaka, na amin'ny tabataba.
24:19 Fa nisy Jiosy sasany avy any Asia no ireo izay tokony ho niseho teo anatrehanao hiampanga ahy, raha manana na inona na inona amiko.
24:20 Na aoka ireto olona ireto hilaza ireo eto raha nahita Ahy izay mety ho faharatsiana, raha nitsangana teo anatrehan'ny Synedriona.
24:21 Fa raha nijanona teo afovoany, I nilaza fotsiny momba izany zavatra iray: momba ny fitsanganana amin'ny maty. Ny momba izao no itsarana ahy amin'izao andro izao ianareo. "
24:22 Ary Felix, rehefa fantatra ny fahalalana be dia be momba izany fampianarana izany, nitandrina azy am-piandrasana, amin'ny hoe:, "Rehefa Lysia ny komandy efa tonga, Izaho no hanome anareo ny mihaino. "
24:23 Ary izy nandidy ny kapiteny hiambina azy, ary mba haka sasatra, fa tsy misy mandrara ny tsy nanompo Azy.
24:24 Avy eo, rehefa afaka andro vitsivitsy, Felix, tonga sy Drosila vadiny izay Jiosy, nampaka an'i Paoly, ary nihaino azy ny amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy.
24:25 Ary rehefa dia nitori momba ny rariny sy ny fahadiovam-pitondrantena, ary momba ny fitsarana ho avy, Nangovitra i Felix, ary izy namaly: "Amin'izao fotoana izao, mandeha, fa mbola eo ambany mpiambina. Avy eo, Amin'ny fotoana, Dia hampaka anao. "
24:26 Izy ihany koa mba manantena fa vola homena azy Paoly, ary noho izany, dia nampiantso azy matetika sy niresaka taminy.
24:27 Avy eo, rehefa afaka roa taona no lasa, Feliksa i Festosy no nandimby ny Portius. Ary satria te-hampiseho Feliksa manokana sitraka tamin'ny Jiosy, dia niala i Paoly aoriana toy ny voafonja.
Asan'ny Apostoly 25
25:1 Ary noho izany, Festosy rehefa tonga tany amin'ny faritanin'i, rehefa afaka telo andro, dia niakatra tany Jerosalema avy tany Kaisaria.
25:2 Ary ny lohan'ny mpisorona, ary ireo voalohany, teo amin'ny Jiosy, nandeha taminy izay niampangany an'i Paoly. Ary izy ireo mangataka azy,
25:3 nangataka azy hohelohina, ka handahatra izy mba hoentina any Jerosalema, izay foana izy ireo otrika mba hamono azy eny an-dalana.
25:4 Ary Festosy namaly fa Paoly dia nambenana tao an Kaisaria, ary tsy ho ela izy handeha any.
25:5 "Koa," hoy izy, "Aoka izay eo aminareo izay afaka, nidina tamin'izany andro izany, ary raha misy heloka eo amin'ny lehilahy, mba hiampangany Azy. "
25:6 Avy eo, rehefa nitoetra teo aminy tsy mihoatra noho ny havaloana na hafoloana, dia nidina nankany Kaisaria. Ary amin'ny andro manaraka, dia nipetraka teo amin'ny seza fitsarana teo, ary nasainy nitarika an'i Paoly ho any.
25:7 Ary rehefa nentina, ny Jiosy izay nidina avy tany Jerosalema dia nitsangana manodidina azy, manipy avy fiampangana lehibe maro, tsy izay dia afaka manaporofo.
25:8 Paoly an'i fiarovana ity: "Na tamin'ny lalàn'ny Jiosy, na tamin'ny tempoly, na tamin'i Kaisara, no tafintohina tamin'izay raharahany. "
25:9 Ary Festosy, te-haneho kokoa sitraka tamin'ny Jiosy, dia namaly an'i Paoly amin'ny hoe:: "Moa ve ianao vonona ny hiakatra ho any Jerosalema, ary mba hotsaraina any ny amin'izany zavatra izany eo anatrehako?"
25:10 Fa hoy Paoly:: "Efa mitsangana eo amin'ny fitsarana Kaisara, izay izay tokony hitsarana. I Tsy nanao ratsy tamin'ny Jiosy, araka ny fantatrao tsara.
25:11 Ary raha nisy nataoko loza tamin-drizareo, na raha nanao zavatra tokony ho faty, Tsy manohitra ny maty. Fa raha tsy misy na inona na inona izany momba izay niampanga ahy, tsy misy hahavonjy ahy ho azy ireo. Handahatra eo anatrehan'i Kaisara aho. "
25:12 Ary Festosy, dia niteny tamin'ny mpanolo-, namaly: "Efa nifidy ny handahatra any anatrehan'i Kaisara, ho an'i Kaisara ianao, dia handeha. "
25:13 Ary rehefa afaka andro vitsivitsy no lasa, Agripa mpanjaka sy Berenika nidina tany Kaisaria, niarahaba Festosy.
25:14 Ary satria nitoetra teo nandritra ny andro maro, Festosy niteny tamin'ny mpanjaka ny momba an'i Paoly, nanao hoe:: "Nisy lehilahy anankiray no sisa aoriana tahaka ny mpifatotra Feliksa.
25:15 Fony aho tany Jerosalema, ny mpitarika ny mpisorona sy ny loholon'ny Jiosy tonga tamiko ny momba azy, nangataka ny fanamelohana azy.
25:16 Dia namaly azy fa tsy ny fanaon'ny Romana ny manameloka olona, fony izy tsy mbola izay no efa voampanga no nifanatrika tamin'ny mpiampanga sy efa nandray ny fahafahana hiaro tena, mba hanadiovana ny tenany ny fiampangana.
25:17 Noho izany, rehefa tonga eto, dia tsy mba nijanonjanona, amin'ny andro manaraka, nipetraka teo amin'ny seza fitsarana teo, Dia nandidy ny lehilahy mba ho entina.
25:18 Fa rehefa ny mpiampanga efa nitsangana, dia tsy manolotra na fiampangana momba azy, izay ratsy Miahiahy aho.
25:19 Fa tsy, dia nitondra an'i Jesosy ny sasany fifandirana momba ny amin'ny fivavahany sy momba ilay atao hoe Jesosy, izay efa maty, nefa nolazain'i Paoly ho velona nanamafy.
25:20 Noho izany, na dia nanana ahiahy momba izany karazana fanontaniana, Nanontany azy aho raha efa vonona handeha ho any Jerosalema, ary mba hotsaraina any ny amin'izany zavatra izany.
25:21 Fa satria i Paoly hahasarika hotehirizina ho an'ny fanapahan-kevitra eo anatrehan'i Aogosto, Dia nanome baiko nambenana, mandra-pandefako azy ho any amin'i Kaisara. "
25:22 Dia hoy Agripa tamin'i Festosy: "Izaho koa dia te-handre izay lehilahy izay." "Rahampitso," hoy izy, "Dia handre azy ihany ianao."
25:23 Ary amin'ny andro manaraka, Agripa sy Berenika, rehefa tonga amin'ny ostentation lehibe, ary nanao ny efitrano ny tribunes sy ny lehibe tao an-tanàna, Paoly dia nentina tany, araka ny didin'i Festosy.
25:24 Ary hoy Festosy:: "Mpanjaka Agripa, ary izay rehetra miaraka aminay ankehitriny, hitanareo io lehilahy io, momba izay rehetra maro be ny Jiosy tany Jerosalema nanelingelina ahy, mangataka ary nangataka mba tsy havela hovelomina intsony ilehio.
25:25 Marina tokoa, Efa nahita na inona na inona dia namoaka azy izay tokony hahafaty. Fa satria ny tenany no ta-handahatra amin'ny, fa ny fitsipiko dia handefa azy.
25:26 Fa izay tapa-kevitra ny tsy hanoratra amin'ny mpanjaka momba azy. Noho io, Nitondra azy Aho eo anatrehanao rehetra, ary indrindra eo anatrehanao, Ry Agripa mpanjaka ô, amin'izay mba, indray mandeha ny fanadihadiana efa nitranga, Mba hanan-javatra hanoratra.
25:27 Fa amiko dia toa tsy mety ny mampanatitra mpifatotra, ary tsy milaza ny fiampangana azy teo. "
Asan'ny Apostoly 26
26:1 Na izany aza tena, Hoy Agripa tamin'i Paoly, "Efa navela ho anareo mba hilaza ny tenanao." Avy eo i Paoly, manitatra ny tànany, nanomboka hanatitra ny fiarovan-tenany.
26:2 "Izaho mihevitra ny tenako sambatra, Ry Agripa mpanjaka ô, fa Izaho no hanome fiarovana avo ho ahy eo anatrehanao anio, mikasika ny zavatra rehetra momba izay iampangan'ny Jiosy,
26:3 indrindra satria fantatrao ny zava-drehetra izay mikasika ny Jiosy, na fomba amam-panao sy ny ady hevitra. Noho io, Miangavy anao aho mba hihaino ahy amim-paharetana.
26:4 Ary azo antoka fa, ny Jiosy rehetra fantatsika momba ny fiainako hatramin'ny fahazazako, izay nanana ny voalohany eo amin'ny ny olona tao Jerosalema.
26:5 Fantatr'izy ireo tsara ahy hatramin'ny voalohany, (raha toa izy ireo ho vonona ny hanolotra fijoroana ho vavolombelona) fa nonina araka ny tena tapa-kevitra sekta ny fivavahantsika: toy ny Fariseo.
26:6 Ary ankehitriny, dia ao amin'ny fanantenana ny teny fikasana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny razantsika izay mijoro iharan'ny fitsarana.
26:7 Izany no fampanantenana fa firenentsika roa ambin'ny folo, manompo andro aman'alina, Manantena ny hahita. About izany fanantenana, Ry mpanjaka ô, I iampangan'ny Jiosy.
26:8 Nahoana no tsy mba hotsaraina tena mampino aminareo rehetra fa mba manangana ny maty?
26:9 Ary azo antoka fa, Izaho taloha nihevitra fa tsy mety raha zavatra amin'ny fomba maro izay mifanohitra amin 'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta.
26:10 Izany ihany koa ny fomba tany Jerosalema aho, nanao. Ary noho izany, I fonosina maro ny olona masina any am-ponja, rehefa nahazo fahefana tamin'ny mpitarika ny mpisorona. Ary raha mbola tsy maintsy hamonoana, Izaho nitondra ny didim-pitsarana.
26:11 Ary teo amin'ny synagoga rehetra, nanasazy azy ireo matetika raha, Dia nanery azy hiteny ratsy. Ary rehefa mainka maddened hamely azy ireo, Aho, dia nanenjika azy ireo, hatramin'ny tanàna any ivelany.
26:12 Taorian'izay, araka izay nandeha ho any Damaskosy, amin'ny fahefana sy ny fahazoan-dalana avy any amin'ny mpisoronabe,
26:13 amin'ny mitataovovonana, Ry mpanjaka ô, Izaho sy ireo izay niaraka tamiko koa, nahita teny an-dalana fa tany an-danitra nanelatrelatra manodidina ahy tamin'ny voninahitra lehibe kokoa noho ny an 'ny masoandro.
26:14 Ary tamin'ilay tokony nanaovana rehetra nianjera tamin'ny tany, Dia nandre feo niteny tamiko tamin'ny teny hebreo: 'Saoly, Saul, nahoana no manenjika ahy ianao? Zavatra sarotra aminao ny hanipaka ny fanindronana. '
26:15 Dia hoy izaho:, 'Iza ianao, Tompo?'Ary hoy ny Tompo:, 'Izaho no Jesosy, Izay enjehinao.
26:16 Fa mitsangàna, ka mijoroa amin'ny tongotrao. Fa niseho taminao noho izany antony: ka dia mba hametraka anao ho mpanompo sy ho vavolombelona ny amin'ny zavatra izay efa hitanao, ary ny amin'ny zavatra izay hasehoko anao:
26:17 hanavotana anao amin'ny olona sy ny firenena izay ankehitriny no naniraka anao,
26:18 mba hampahiratra ny masony, mba hiova fo amin'ny maizina ho amin'ny mazava, ary amin'ny fahefan'i Satana ho amin'Andriamanitra, mba handray ny famelan-keloka sy lova eo amin'ny olona masina, ny alalan 'ny finoana izay ao amiko.'
26:19 Nanomboka teo, Ry Agripa mpanjaka ô, Tsy aho tsy mino ny any an-danitra fahitana.
26:20 Fa izaho kosa nitory, voalohany ho an 'ireo izay any Damaskosy sy Jerosalema, ary avy eo ho an'ny faritra manontolo Jodia, sy amin'ny jentilisa, ka dia izy ireo mibebaka sy niova fo ho an'Andriamanitra, manao ny asa izay mendrika ny fibebahana.
26:21 Teo Noho izany antony izany fa ny Jiosy, rehefa nahazo ny ahy fony aho mbola tany amin'ny tempoly, nitady hamono ahy.
26:22 Saingy rehefa nanampy ny fanampian 'Andriamanitra, mandraka androany, Efa mitsangana eo mitory ny kely na ny lehibe, nanao hoe: na inona na inona mihoatra noho izay nolazain'ny mpaminany sy Mosesy fa ho efa ho amin'ny ho avy:
26:23 fa hijaly i Kristy, ary izy no ho voalohany amin'ny fitsanganana amin'ny maty, ary mba hitondra fahazavana amin'ny olona Isiraely sy amin'ny hafa firenena. "
26:24 Raha mbola nilaza izany zavatra izany, ary mampiseho ny fiarovan-tenany, Dia hoy Festosy tamin'ny feo mahery: "Paul, very saina ianao! Ny fianarana be loatra efa niova ho anao ho adala. "
26:25 Fa hoy Paoly:: "Tsy very saina aho, ry Festosy tsara indrindra, fa aleo miteny aho tenin'ny fahamarinana sy ny fahononan-tena.
26:26 Fa ny mpanjaka mahalala momba izany zavatra izany. Izy ihany koa, Miteny aho mandrakariva. Fa ataoko fa tsy misy ireo zavatra ireo tsy fantatra ho azy. Ary na dia ireo zavatra ireo natao tao amin'ny takona.
26:27 Mino ve ianao fa ny Mpaminany, Ry Agripa mpanjaka ô? Fantatro fa mino ianao. "
26:28 Dia hoy Agripa tamin'i Paoly, "Ny lafiny sasany, no nandresy lahatra ahy ho tonga Kristianina ianao. "
26:29 Fa hoy Paoly:, "Manantena amin'Andriamanitra aho, izay, na hatraiza ny kely sy ny lehibe hatraiza, tsy ianao ihany, fa izay rehetra mandre ahy anio ihany dia ho tahaka ny anahafako, afa-tsy amin'ireto gadra ireto ihany. "
26:30 Ary ny mpanjaka nitsangana, ary ny governora, ary Berenika, ary izay nipetraka tao ireo.
26:31 Ary rehefa niala, samy mbola niresaka samy izy, nanao hoe:, "Io lehilahy io tsy mbola nanao na inona na inona tokony hahafaty, na ny am-ponja. "
26:32 Dia hoy Agripa tamin'i Festosy, "Io lehilahy io, dia ho efa nafahana, raha tsy nampakatra ny raharaha any amin'i Kaisara. "
Asan'ny Apostoly 27
27:1 Avy eo dia nanapa-kevitra ny handefa azy sambo nankany Italia, ary i Paoly, miaraka amin'ny hafa tany am-ponja, Tokony ho voavonjy tamin'ny kapiteny atao hoe Jolio, ny andiana miaramila ny Augusta.
27:2 Rehefa avy niakatra sambo-tsambo avy any Adramytena, niondrana an-tsambo izahay, ary nanomboka nanaraka ny seranana hitety tany Asia, amin'ny Aristarko, ny Masedoniana avy any Tesalonika, manatevin-daharana anay.
27:3 Ary amin'ny andro manaraka, tonga tany Sidona izahay. ary Julius, mandray Paul humanely, namela azy ho any amin'ny namany sy ny hikarakara ny tenany.
27:4 Ary rehefa niondrana an-tsambo izahay avy teo, navigated ambany Sipra izahay, satria nanohitra ny rivotra.
27:5 Ary fikarohana aza ny ranomasina tany Kilikia sy Pamfilia, dia tonga tany Lystra, izay any Lykia.
27:6 Ary tao no nahitan'ny kapiteny avy any Aleksandria nandeha sambo nankany Italia, ka namindra antsika ho azy.
27:7 Ary rehefa nandeha niadana nandritra ny andro maro, ary efa zara raha tonga tandrifin'i Kinido, fa ny rivotra dia misakana antsika, dia niondrana an-tsambo ho any Kreta, akaiky Salmon.
27:8 Ary zara raha afaka handeha an-tsambo taloha izany, dia tonga teo amin'ny fitoerana iray, izay atao hoe tsara fialofana, manaraka izay no tanànan'i Lasea.
27:9 Avy eo, rehefa avy be ny fotoana efa lasa, ary satria nandeha sambo intsony dia ho hendry ny Andro Fifadiana, satria efa izao andro lasa, Nampahery azy i Paoly,
27:10 ary hoy izy taminy: "Men, Hitako fa ny diany izao tandindomin-doza ny fahasimbana sy fahavoazana be, tsy ny entana sy ny sambo, fa koa mankany amin 'ny fiainantsika. "
27:11 Fa ny kapiteny dia mainka matoky ny lehiben'ny mpiambina sy ny tantsambo ny sambo, noho ny amin'ny zavatra lazaina Paoly.
27:12 Ary satria tsy mety tsara seranan-tsambo izay handany ny ririnina, ny hevitry ny maro an'isa dia handeha an-tsambo niala teo, ka sao mba ho afaka tonga amin'ny Fenisia, mba handany ny ririnina any, amin'ny seranan-tsambon'i Kreta, izay manatrika dia mivoaka hankany amin'ny atsimo andrefana sy avaratra andrefana.
27:13 Ary satria ny fifofofofon'ny rivotra avy any atsimo moramora, Nihevitra izy ireo mba hanatratra ny tanjona. Ary rehefa efa niainga avy tany Asson, dia nolanjainy anchor amin'ny Kreta.
27:14 Ary tsy ela rehefa afaka izany,, nisy rivotra mahery setra tonga hamely azy, izay antsoina hoe ny avaratra Wind.
27:15 Ary indray mandeha ny sambo efa tratra ao aminy fa tsy afaka miady manohitra ny rivotra, manome noho ny sambo ho any amin'ny rivotra, izahay roa lahy dia noroahina teny.
27:16 Avy eo, ho voatery miaraka amin'ny nosy anankiray isika, izay antsoina hoe ny Tail, izahay zara raha afaka mihazona hatrany ny sambo ny lakana mpamonjy aina.
27:17 Rehefa izany dia nakarina, Nampiasa azy io izy ireo mba hanampy amin'ny fiarovana ny sambo. Fa natahotra mba hidona. Ary rehefa nampidina ny lain-tsambo, izy ireo ho noroahina teny toy izany.
27:18 Avy eo, satria izahay misamboaravoara momba ny tafio-drivotra mafy avy, amin'ny andro manaraka, dia nanipy ny mavesatra entana dranomasina.
27:19 Ary amin'ny andro fahatelo, amin'ny tànany, dia nanipy ny fitaovana ny sambo dranomasina.
27:20 Avy eo, rehefa tsy hita ny masoandro na ny kintana niseho nandritra ny andro maro, ary tsy hanam-pahataperana ny rivo-doza nananontanona, ny fanantenana noho ny fiarovana dia izao nesorina.
27:21 Ary rehefa avy nifady hanina nandritra ny fotoana ela, Paul, mijoro eo aminy, nanao hoe:: "Azo antoka fa, olona, tokony ho nihaino ahy, ary tsy niala tao Kreta, mba hahatonga izany fahasimbana sy fatiantoka.
27:22 Ary ankehitriny, avelao aho mandresy lahatra anao ho be herim-po ao amin'ny fanahy. Fa tsy hisy very ny aina eo aminareo, afa-tsy ny sambo.
27:23 Fa nisy anjelin'ny Andriamanitra, izay voatendry ho ahy, ary izay manompo, nitsangana teo anilako halina,
27:24 nanao hoe:: 'Aza matahotra, Paul! Tsy maintsy ho anao ny hitsangana eo anatrehan'i Kaisara. Ary indro, Andriamanitra dia nanome ho anao izay rehetra miara-dia aminao. '
27:25 Noho io, olona, ho be herim-po ao amin'ny fanahy. Fa matoky aho fa Andriamanitra no hitranga Toy izany koa fa efa nilaza tamiko.
27:26 Fa tsy maintsy ho antsika ny tonga amin'ny nosy anankiray isika. "
27:27 Avy eo, rehefa tonga ny alina fahefatra ambin'ny folo, araka ny fikarohana izahay any an-dranomasina ny Adria, ny dia ny antsasaky ny alina, Nino ireo tantsambo fa nahita ampahany amin'ny tany.
27:28 Ary eo nandatsaka ny lanjany, dia nahita lalina Nivezivezy eran'ny roa-polo. Ary ny sasany avy any lavitra, dia nahita lalina dimy ambin'ny folo Nivezivezy eran'ny.
27:29 Avy eo, natahotra fa mety hitranga eo amin'ny toerana saro, dia nandatsaka vatofantsika efatra teo am-bodisambo, ka dia manantena mazava ho tonga tsy ho ela.
27:30 Na izany aza tena, ireo tantsambo nitady fomba iray handositra ny sambo, fa efa nampidina anaty lakan'aina teny amin'ny ranomasina, ny mody fa efa nitady nandatsaka vatofantsika avy amin'ny tsipìka ny sambo.
27:31 Ary dia hoy Paoly tamin'ny kapiteny sy ny miaramila, "Raha tsy ireo lehilahy ireo mijanona eto an-tsambo, dia tsy ho afaka ho voavonjy. "
27:32 Dia notapahin'ny miaramila ny mahazaka ho ilay lakana mpamonjy aina, ka namela azy ho lavo.
27:33 Ary raha vao mazava, Nangataka i Paoly fa izy rehetra mihinana, nanao hoe:: "Ity no andro fahefatra ambin'ny folo izay efa niandry sy fanohizana ny fifadian-kanina, naka na inona na inona.
27:34 Izany no antony, Dia miangavy anareo aho mba hanaiky sakafo, noho ny ara-pahasalamana. Fa tsy misy volo avy amin'ny lohan'ny misy eo aminareo dia ho very. "
27:35 Ary rehefa nilaza izany, nandray mofo, dia nisaotra an'Andriamanitra teo imason'ny olona rehetra. Ary nony efa voasokatra, dia nihinana.
27:36 Ary izy rehetra dia lasa milamina kokoa amin'ny fanahy. Ary izy ireo koa dia naka sakafo.
27:37 Marina tokoa, izahay fito-polo amby roan-jato sy enina fanahy amin'ny sambo.
27:38 Ary rehefa nitaiza amin'ny sakafo, dia hanamaivana ny sambo, nanarato teny ny vary ho any amin'ny ranomasina.
27:39 Ary rehefa tonga ny andro efa, dia tsy nahalala ny tontolo. Na izany aza tena, izy ireo vao nahita ny iray tery Inlet manana ny amoron-dranomasina, ho any izay nihevitra fa mety ho azo atao ny hanery ny sambo.
27:40 Ary rehefa nasainy nametraka ny vatofantsika, nataony nanolo-tena ho an-dranomasina, tamin'izany andro izany namaha ny voahazona ny rudders. Ary noho izany, manangana ny Lay lehibe ny gusting rivotra, Dia nanosika tamin'ny mankany amoron-dranomasina.
27:41 Ary rehefa nitranga teo amin'ny toerana misokatra ho roa ranomasina, dia nihazakazaka ny sambo amin'ny tany. ary tokoa, ny tsipìka, rehefa nihetsika, nijanona ho raikitra, marina tokoa fa ny vodisambo dia tapaka ny herisetra ao an-dranomasina.
27:42 Ary ny miaramila tao fifanarahana mba hamono ny mpifatotra, fandrao misy, rehefa afa-mandositra ny milomano, mba handositra.
27:43 Fa ny kapiteny, te-hamonjy an'i Paoly, Voarara izany tsy ho atao. Ary nandidy ireo izay afaka nilomano mba hitsambikina amin'ny voalohany, ary ny ho afa-mandositra, ary mba ho any amin'ny tany.
27:44 Ary ny ny olon-kafa, ny sasany dia nitondra amin'ny hazo fisaka, ary ny sasany amin'ireo zavatra izay an'ny sambo. Ary dia toy izany no nitranga fa ny olona rehetra dia afaka nandositra ho any amin'ny tany.
Asan'ny Apostoly 28
28:1 Ary rehefa avy afa-nandositra, isika dia nahatsapa fa ny nosy atao hoe Malta. Na izany aza tena, ny tompon-tany tsy nanolotra antsika ny maha-olombelona kely fitsaboana.
28:2 Fa namelombelona antsika rehetra amin'ny kindling afo, satria orana dia akaiky sy noho ny hatsiaka.
28:3 Ary rehefa fantatr'i Paoly efa tafangona iray trotroana rantsankazo, ary efa napetrany teo ambonin'ny afo, ny menarana, izay efa voasinton'ny ny hafanana, niraikitra tamin'ny tànany.
28:4 Ary tena, ny tompon-tany, raha nahita ny biby niraikitra tamin'ny tànany, izy ireo hoe niresaka: "Azo antoka fa, ity lehilahy ity dia tsy maintsy ho mpamono olona, Fa na dia voavonjy tamin'ny ranomasina, famaliana dia tsy namela azy ho velona. "
28:5 Fa nanintsana ny zavaboary ho any amin'ny afo, izy tokoa tsy nisy vokany ratsy.
28:6 Fa izy ireo satria nataony fa ela nivonto ny, ary avy eo dia ho tampoka miankohoka sy ho faty. Fa rehefa niandry ela, ary tsy nahita narary vokatry ao aminy, dia niova saina, ary dia nilaza fa izy dia andriamanitra.
28:7 Ary tamin'ireo dia nanana fitoerana Estates ny mpanapaka ny nosy, atao hoe Publius. ary, nitondra antsika amin'ny, Nampiseho antsika ny tsara fanahy mandray vahiny nandritra ny telo andro.
28:8 Ary nony fa ny rain'i Publius nandry ratsy amin'ny tazo sy ny nivalan-dra. Paoly niditra taminy, ary rehefa nivavaka sy efa nametrahan'i tanana taminy, dia namonjy azy.
28:9 Ary rehefa natao izany, izay rehetra narary teo amin'ny nosy nanatona ka dia sitrana.
28:10 Ary avy eo izy ireo koa dia nanolotra antsika be no nomen'ny olona. Ary fony mbola vonona ny niondrana an-tsambo, dia nanome antsika na inona na inona ilaina.
28:11 Ary noho izany, rehefa afaka telo volana, dia niondrana an-tsambo an-tsambo avy any Alexandria, no anarany 'ny Castors,'Ary izay efa nandany ny ririnina teo amin'izany nosy.
28:12 Ary nony efa tonga tany Syrakosa, izahay nahemotra tao nandritra ny telo andro.
28:13 avy teo, nandeha sambo akaikin'ny amoron-dranomasina, dia tonga tao Regioma. Ary rehefa afaka indray andro, miaraka amin'ny atsimo ny rivotra, tonga izahay tamin'ny andro faharoa amin'ny tao Potioly.
28:14 Ery, rehefa avy toerana, ireo rahalahy, izahay dia nangataka mba hitoetra tao aminy nandritra ny fito andro. Ary avy eo isika dia nandeha ho any Roma.
28:15 ary, ireo rahalahy rehefa nandre anay, dia lasa izy nitsena anay hatrany amin'ny Tsenan'Apio sy ny Tranombahiny Telo. Ary rehefa nahita azy Paoly, ka misaora Andriamanitra, dia naka herim-po.
28:16 Ary nony efa tonga tany Roma, Paoly dia nomena fahazoan-dalana hijanona irery, amin'ny miaramila anankiray izay niambina azy.
28:17 Ary rehefa afaka ny andro fahatelo, dia novorina ny mpitarika ny Jiosy. Ary rehefa nivory, dia hoy izy taminy: "Noble rahalahy, Efa nanao na inona na inona manohitra ny olona, na tamin'ny fomba amam-panao ny ray, nefa izaho novonjena toy ny mpifatotra avy tany Jerosalema ho eo an-tànan'ny Romana.
28:18 Ary rehefa nanao hihaino ahy, dia ho nafahana ahy, satria tsy nisy tranga ho faty hamely ahy.
28:19 Fa ny Jiosy niteny hamely ahy, Dia tery aho fa handahatra amin'i Kaisara, na dia tsy toy ny raha nanana karazana fiampangana hanameloka ahy aho, firenena.
28:20 Ary noho izany, noho io, Dia nangataka ny hahita anareo sy hiteny aminao. Fa noho ny fanantenan'ny Isiraely izay anaovana Ahy nanodidina amin'ity gadra ity. "
28:21 Fa hoy ireo taminy:: "Izahay tsy mbola nahazo taratasy avy tany Jodia momba anao, na mety hanana izany akory va ny hafa vao tonga eo amin'ny rahalahy nitantara na nilaza zava-dratsy hamelezana anao.
28:22 Fa izahay tsy mangataka hihaino ny heviny avy aminao, fa amin'izany antoko, no ahafantarantsika fa izao no efa niteny nanome tsiny na aiza na aiza. "
28:23 Ary nony efa nanendry andro iray ho azy, olona maro be nankany aminy tany ny vahiny faritra. Ary dia nitori, nanambara tamin'ny fanjakan 'Andriamanitra, ka nampanaiky azy ireo ny amin'i Jesosy, fampiasana ny lalàn 'i Mosesy sy ny Mpaminany, hatramin'ny maraina ka mandra-paharivan'ny andro.
28:24 Ary ny sasany nino izay izy nanao hoe:, nefa ny sasany dia tsy nino.
28:25 Ary satria tsy manaiky samy izy, dia lasa nandeha ireo, raha mbola nilaza izany i Paoly teny iray: "Ahoana tsara ny Fanahy Masina no miresaka ny razantsika tamin'ny alalan'ny mpaminany Isaia,
28:26 nanao hoe:: 'Mandehana any amin'ity firenena ity ka lazao aminy: nandre, dia hihaino fa tsy hahafantatra, ka nahita, ho hitanao fa tsy hahita.
28:27 Fa ny fony 'ity vahoaka ity efa nanjary donto, ka dia nihaino amin'ny misalasala sofiny, ary efa nakimpiny ny masony mafy, fandrao mba hahita ny masony, ka henoy ny sofiny, ary hahalala ny fony, ary hiova fo, dia hahasitrana azy Aho. '
28:28 Noho izany, aoka ho fantatrareo, fa izao famonjen'Andriamanitra izao dia nampitondraina ho any amin'ny jentilisa, ary izy no mahahaino izany. "
28:29 Ary rehefa nilaza izany, ny Jiosy dia niala taminy, na dia mbola nanana fanontaniana maro samy izy.
28:30 Ary izy nitoetra roa taona ngarangidina tao an-toby nohofana. Ary izy nandray izay rehetra niditra tao aminy,
28:31 nitory ny fanjakan'Andriamanitra ka nampianatra ny zavatra izay avy amin'ny Tompo i Jesoa Kristy, amin'ny fahatokiana, tsy misy fandraràna.
Septambra 16, 2019
Septambra 15, 2019